နေ့စဉ်တိုင်းရင်းသားသတင်းများ စုဆောင်းတင်ပြခြင် ၊ နစေ့ဉျတိုငျးရငျးသားသတငျးမြား စုဆောငျးတငျပွခွငျး – Federal Journal
ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြရေးရခငျြတယျဆိုရငျ အားလုံးပါဝငျစတေဲ့မူကို ခမြှတျဖို့လိုတယျ
အာဏာသိမျးမှုနှငျ့ဆကျစပျသညျ့ ပဋိပက်ခတို့ကွောငျ့ ကရငျနီပွညျနယျရှိ အရပျသားသဆေုံးမှု (၂၆၃) ဦးထိ တိုးလာကွောငျး PKPF ထုတျပွနျ
“ရာမညမှနျပွညျ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ မူကွမျးဆိုငျရာ”(စကားဝိုငျး)
KIO/KIA ဥက်ကဌ ဗိုလျခြုပျကွီးအငျဘနျလ၏ မှေးနသေို့ အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရအဖှဲ့၊ ပွညျထောငျစု ဝနျကွီးခြုပျမနျးဝငျးခိုငျသနျးမှ သဝဏျလှာ ပေးပို့
နေ့စဉ်တိုင်းရင်းသားသတင်းများ စုဆောင်းတင်ပြခြင် ၊ နစေ့ဉျတိုငျးရငျးသားသတငျးမြား စုဆောငျးတငျပွခွငျး
(No. 58 , September 18, 2020)
၁။ ကချင်တွင် ပြောင်းရွှေ့တပ်ရင်းများကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ထိခိုက်မည်ကို စိုးရိမ်
၂။ အောက်ခြေထိတွေ့မှုများ ရှောင်ရှားနိုင်ရေး ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခဲ့
၃။ ညမထွက်ရအမိန့်နှင့် ကိုဗစ်ကန့်သတ်ချက်များချိုးဖောက်သည့် ပလက်ဝဒေသခံအချို့ကို အရေးယူမည်
၄။ ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာသဖြင့် တိုက်ပွဲဖြစ်လာမည်ကို စိုးရိမ်နေ
၅။ ဘတ်ဂျက်နှစ်ကုန်ခါနီးအထိ တိုင်းရင်းသားစာပေအဖွဲ့တွေ ဘတ်ဂျက်မချပေးနိုင်သေးလို့ အခက်တွေ့
၆။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရန် နုတ်ထွက်ပြီးမှ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းဖြစ်ဟု အမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးပြော
၇။ ရသေ့တောင်တွင် လက်နက်ကြီးကျ ၁ ဦးသေ ၂ ဦးဒဏ်ရာရ
၈။ သီပေါ – နမ့်လန် လမ်းဘေးတွင်အမျိုးသားတဦး အလောင်းတွေ့
၉။ ကော့ကရိတ်ခရိုင်ရှိ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နယ်မြေများ၌ ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်သေး
၁၀။ ချင်းပြည်နယ် ကျီခါးမြို့တွင် ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ပြုလုပ်
၁၁။ RCSS/SSA ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ စစ်ဆေးရေးဂိတ် ပြန်ထောင်
၁၂။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပလက်ဝမြို့နယ်မှ ကျေးရွာ(၉) အုပ်စု ပါဝင်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုဆို
၁၃။ လွှတ်တော်သည် အစိုးရကို ထိန်းကျောင်းမှုအားနည်းဟု အမတ်လောင်းထောက်ပြ
၁၄။ ထိုင်းနယ်စပ် ရှမ်းဒုက္ခသည်များ မဲပေးခွင့်ရအုံးမည်မဟုတ်
၁၅။ Covid-19 ကြောင့် ကျောက်မျက်ရတနာများ ထက်ဝက်ဈေးဖြင့် ရောင်းချနေရ
၁၆။ ဖာလာသီးပေါ်ချိန် ဈေးကျသည့်အတွက် စိုက်တောင်သူများအခက်အခဲဖြစ်
၁၇။ ဖားကန့်တွင် Covid-19 အတည်ပြုလူနာ ၄ ဦး ထပ်တိုး
၁၈။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ quarantine စင်တာများအတွက် နေ့စဉ် စားနပ်ရိက္ခာကို WFP က ထောက်ပံ့မည်
၁၉။ ကိုဗစ်-၁၉ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးနေစဉ် မူးယစ်ဆေးမိ
၂၀။ COVID-19 ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ KNC ပါတီက မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများ ပြုလုပ်နေပြီး နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်နိုင်ဟု KNC ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ပြောကြား
၂၁။ တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်မယ့်အချိန် မဟုတ်ကြောင်း ANP ပါတီ ထုတ်ပြန်
၂၂။ ဆီဆိုင် တွင် ၁၃နှစ် အရွယ် ကလေးတဦးထံ ကိုဗစ်-၁၉ တွေ့
၂၃။ ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကြောင့် အတိုက်ခံပါတီများ မဲဆွယ်ရာတွင် အခက်ကြုံနေရ
၂၄။ မွန်ပြည်နယ် သစ်တောဝန်ထမ်း ၈ ဦး ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံရ
၂၅။ ဦးဂါကျေးရွာမှ မုဒိမ်းမှုကိစ္စ တပ်မတော်သားသုံးဦးနှင့် တာဝန်ရှိသူများကို စစ်စည်းကမ်းအရ အရေးယူမည်
ကချင်ပြည်နယ် ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်တွင် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ၁,၈၆၂ ဦးအနက် ဩဂုတ်လဆန်းပိုင်းက ပြောင်းရွှေ့လာသူ တပ်မတော်သား ၄၀၀ ကျော်ပါဝင်နေကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်လောင်းများထံမှ (စက်တင်ဘာ ၁၇) တွင် သိရှိရ သည်။ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရ ဒေသတစ်ခုတွင် ရက်ပေါင်း ၉၀ နှင့်အထက် ရောက်ရှိနေထိုင်ပြီးမှသာ ထိုဒေသ၌ မဲစာရင်း တင်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းတွင် ရုတ်တရက်ရွှေ့ပြောင်းလာသော တပ်မတော်သားများ ပါဝင်နေခြင်း အပေါ် ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်လောင်းများက စိုးရိမ်မှုရှိနေပြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံ မေးမြန်းထားသည်။
“အခု ကျွန်တော့်မဲဆန္ဒနယ်မှာ စစ်သားတွေ မဲပေးဖို့ စောင့်နေကြတယ်။ သူတို့က အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ ၂၀၁၅ တုန်းက လည်း ဒီလိုမျိုးစောင့်နေတဲ့ပုံစံမျိုး မရှိခဲ့ဘူး။ သူတို့ထည့်မယ့်ဘက်က မဲနိုင်သွားဖို့တော့ ရှိတယ်။ စစ်တပ်မဲနဲ့ပဲ အရေးနိမ့် လာမလား စိုးရိမ်တာပေါ့နော်” ဟု ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ (KSPP) မှ ဦးကွမ်ဂေါင်အောင်ခမ်းက ပြောသည်။ လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဦးကွမ်ဂေါင်အောင်ခမ်းသည် ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နေရာအတွက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ရက်ပေါင်း ၉၀ နေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲ မဲစာရင်း၌ တပ်မတော်သားများပါဝင်နေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ထံ မေးမြန်းထားဆဲဖြစ်ကြောင်း ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်မှ NLD ပါတီဝင် လက်ရှိ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဂျေထုရော်က ပြောသည်။ ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်အခြေချ တပ်မတော်စခန်းများမရှိသော်လည်း ရှေ့တန်းရောက် တပ်ရင်း တပ်ဖွဲ့များမှ တပ်မတော်သားများက ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပုံစံ ၃ ဖြင့် လျှောက်ထားလာသောကြောင့် လက်ခံထားခြင်းဖြစ် သည်ဟု မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်နိုင်ဦးက ပြောသည်။ လုံခြုံရေးနှင့်သက်ဆိုင် သောကြောင့် တပ်မတော်သားများ၏ မဲစာရင်းအတိအကျကို ပေး၍ မရသေးကြောင်း၊ သို့သော် ပုံစံ ၃ဖြင့် လျှောက်ထား လာသော တပ်မတော်သား ၄၀၀ ၏ အချက်အလက်များကို စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် စတင်စိစစ်မည်ဖြစ်ပြီး အချက် အလက်ပြည့်စုံပါက လက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးအောင်နိုင်ဦးက ပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း မကြာခင်က ရွှေ့ပြောင်းလာသည့် တပ်မတော်သားများ၏ မဲစာရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း လက်ခံ ဖြေကြားခြင်း မရှိပေ။ https://www.myanmar-now.org/mm/n ews/4518
ကရင့်လက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းကြား အောက်ခြေ မြေပြင်ထိတွေ့မှုများ ရှောင်ရှားနိုင်ရေးအတွက် ကရင်အမျိုး သားအစည်း အရုံး-KNU ဦးဆောင်ပြီး ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်းမှုတစ်ခုကို စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့က KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်နေရာ၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ KNU ၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖြစ်သည့် ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KNLA) အပါအဝင် ကရင် နယ်ခြားစောင့်တပ် (BGF)၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KNU/KNLA –PC) မှ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်များပါဝင်၍ မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အောက်ခြေထိတွေ့မှုများအပေါ် ဆွေးနွေးပြီး ရှေ့ဆက်ထိတွေ့မှု များ မဖြစ်ပေါ်စေရေး နှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှု ရရှိရေးတို့အပေါ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
KNU အတွင်းရေးမှူး (၂) ပဒိုစောလှထွန်းက “ကရင်လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေ ဒီမြေပြင်ဂရောင်းမှာ တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ ထိတွေ့ မှုတွေ မဖြစ်အောင် နားလည်မှုတွေမလွဲအောင်အဲ့ဒီအတွက် တွေ့ကြတယ်။ နောက်တစ်ခုက တလောက ဖြစ်သွားတဲ့ လမ်းဟောင်းဘက်မှာ ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်တော့ ကိုယ့်ကရင်ပြည်သူတွေကြားမှာ အသံမျိုးမျိုးတွေ ထွက်လာတဲ့အပေါ်မှာ အဲ့ဒါကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ပေါ့၊ နားလည်မှု ပိုမိုရရှိဖို့ လိုအပ်တာ ပေါ့”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံမှုတွင် KNLA ဘက်မှ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောဂျော်နီနှင့် ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောဘောကျော်ဟဲ အပါအဝင် KNU ကာကွယ်ရေးနှင့် အခြားထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များ၊ BGF မှ ကရင်ပြည်နယ် နယ်ခြား စောင့်တပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး စောချစ်သူ၊ KNU/KNLA-PC မှ ဗိုလ်မှူးကြီး စောနေစိုးမြ နှင့် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်အချို့တို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ကျန်ရှိသည့် ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည့် ဒီမိုကရေစီ အကျိုးပြုကရင်တပ်မတော်(DKBA) မှာ Covid-19 ကာလ သွားလာရေး အခက်အခဲကြောင့် တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း သိရသည်။ http://kicnews.org/2020/09/%e1%80%b1%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%
ပလက်ဝစစ်ရှောင်များမှာ စားဝတ်နေရေးကျပ်တည်းသဖြင့် ကပ်ရောဂါကို မကြောက်နိုင်တော့ဘဲ နေ့စဉ်အသုံးစားရိတ်ရရန် အသွားအလာကန့်သတ်ထားသည့် ကျောက်တော်မြို့သို့ အထမ်းလိုက်သွားခြင်းဖြစ်သည်ဟု စစ်ရှောင်များ ကူညီသူတစ်ဦးက ပြောသည်။ ကိုဗစ်နိုင်တင်းကန့်သတ်မှုများ ချထားသည့်ဒေသသို့ နယ်မြေကျော်လွန် သွားလာခဲ့သည့် ပလက်ဝနေ အရပ်သား ၄၁ ဦးကို အရေးယူရန် ပြင်ဆင်နေသည်ဟု ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပြောသည်။ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နှင့် မိုင် ၃၀ ကျော်ဝေးသော ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့တွင် အရက်ဆီပုံးများ သွားရောက်သယ်ဆောင်၍ ပြန်လာသည့် စစ်ရှောင်နှင့် အရပ်သား ၄၁ ဦးကို ပလက်ဝမြို့အခြေစိုက် တပ်မတော်ခြေလျင် တပ်ရင် ၂၈၉ က စက်တင်ဘာ ၉ ည ၈ နာရီခန့်တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
ကပ်ရောဂါစည်းကမ်းချက်များနှင့် ညမထွက်ရအမိန့်ကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည့်အတွက် တပ်မတော်က ဖမ်းဆီးခဲ့ကာ နှစ်ရက်ခန့် စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးနောက် ပလက်ဝမြို့နယ်အာဏာပိုင်အဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်ဟု ချင်းပြည်နယ် စည်ပင်သာယာရေး ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်က ပြောသည်။ “သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကို ကျော်လွန်ပြီး ပုဒ်မ ၁၄၄ ကို ဖောက်ဖျက်တာ၊ နောက် ကိုဗစ် နဲ့ဆိုင်တဲ့ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာပုဒ်မနဲ့လည်း ငြိတာပေါ့။ ပုဒ်မနှစ်ခုလောက်နဲ့ ငြိတဲ့သဘောဖြစ်တာပေါ့” ဟု ဦးစိုးထက်က ပြောသည်။
“သူတို့သွားတာကလည်း အပြစ်တော့မရှိပါဘူး။ စားစရာမှမရှိတာကိုး။ ကိုဗစ်ကိုလည်း ကြောက်မနေအားတော့ဘဲ သွားတော့ အခုလိုတွေ ဖြစ်ကုန်တာပေါ့”ဟု မိုင်နန်းဝေက ပြောသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲ မှုဥပဒေတွင် မတူသော ပြစ်မှုများအတွက် အနိမ့်ဆုံးပြစ်ဒဏ် ထောင်ဒဏ် တစ်လမှ အမြင့်ဆုံး ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်သလို ပုဒ်မ ၁၄၄ ညမထွက်ရအမိန့်ကို ချိုးဖောက်ပါက ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၁၈၈ ဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၃ လအထိ အရေး ယူနိုင်သည်။ https://www.myanmar-now.org/mm/news/4506
၂၀၂၀ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာသဖြင့် သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ( RCSS/SSA ) နယ်မြေ အတွင်း တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားလာမည်ကို စိုးရိမ်နေကြောင်း RCSS ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောကြားသည်။ လက်ရှိမှာ RCSS/SSA ထိန်းချုပ်သည့် နယ်မြေတွင် တိုက်ပွဲများ မရှိသော်လည်း တပ်မတော် စစ်အင်အားလှုပ်ရှား/ဖြည့်တင်းနေမှုကြောင့် တိုက်ပွဲ ပြန်ဖြစ်လာမည်ကို စိုးရိမ်နေသည်ဟု RCSS/SSA မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အုမ်ခေး က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။
ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့် ရက်နီးလာသည့်နှင့် အမျှ တဖက်သတ်တိုက်ပွဲ ပုံစံ ပြုလုပ်ပြီး ပြည်သူများကို ထိတ်လန့်အောင် လုပ်လာနိုင်ပြီး၊ ပြည်သူများ ဆန္ဒမဲ ထည့်မည့်နေရာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် မသွားရဲပဲဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်ကြောင်း ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အုမ်ခေး က ပြောသည်။ သျှမ်းပြည် တဝှမ်းတွင် ရွေးကောက်ပွဲနီးလာသည့်နှင့် အမျှ တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်လာမည်ကို တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ နှင့် ပြည်သူများက စိုးရိမ်နေကြသည်။ ယခုလ ၁၁ ရက်မှ စတင်ကာ သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်ခရိုင် မုံးပေါ်ဒေသတွင် ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်( KIA) နှင့် အစိုးရတပ်မတော်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကာ လက်ရှိ အချိန်ထိ စစ်ရေးတင်းမာနေကြောင်းသိရသည်။
“ရွေးကောက်ပွဲနီးလာရင်တော့ ကျမတို့ဖက်က တိုက်ပွဲဖြစ်မှာကိုကြောက်ရသလို၊ အခုက ကိုဗစ်ကိုလည်းကြောက်နေရ တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းမှာ ဖြစ်နေကြဆိုတော့ စိုးရိမ်နေရတာပေါ” ဟု သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မုံးပေါ်ဒေသခံ အမျိုးသမီး တဦးက ပြောသည်။ လာမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် RCSS/SSA ထိန်းချုပ်ရာ နယ်မြေအတွင်း နိုင်ငံရေး ပါတီများ မဲဆွယ်စည်းရုံးရန်အတွက် ကြိုတင် အသိပေးအကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်ကြောင်း စက်တင်ဘာ (၁) ရက်နေ့က ကြေငြာချက် တစောင်ထုတ်ပြန်ထားသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/18493
တိုင်းရင်းသားစာပေအဖွဲ့တွေကို ဘတ်ဂျက်နှစ်ကုန်တော့မယ် ပြည်နယ်အစိုးရကနေ ငွေမချပေးသေးတဲ့အတွက် အခက် အခဲတွေ့နေကြရတယ်လို့ စာပေနှင့်ယာဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့တွေဆီကနေကြားသိရပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်(စ်)ကြောင့် လူစုလူဝေး တွေဖြစ်စေတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားရိုးရာပွဲတော်တွေ၊ အမျိုးသားနေ့တွေ၊ စာပေမွမ်းမံသင်တန်းတွေ စတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကိုတော့ လုပ်ခွင့်မရတော့တဲ့အတွက်အသုံးပြုဖို့ လျာထားတဲ့ ဘတ်ဂျက်ကိုတော့ မချပေးနိုင်တော့ တာဖြစ်ပါ တယ်။
တိုင်းရင်းသားစာပေစာအုပ်ထုတ်လုပ်တာတွေ၊ ကျောင်းစာအုပ်ထုတ်ဖို့လုပ်ငန်းတွေ တချို့လုပ်ငန်းတွေကို ခေါင်းစဉ်ပြောင်း အသုံးပြုဖို့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ ၆ ဖွဲ့က စီစဉ်ထားပေမယ့်လည်း စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့အထိ မရသေးဘူးလို့ ကယားပြည်နယ် ကယန်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီအတွင်းရေးမှူး ဦးခွန်းထက်က ပြောပါတယ်။
“ကိုဗစ်ကာလမို့ လုံးဝမရခဲ့ပါဘူး ကျနောတို့ ကယန်းအမျိုးသားနေ့ဆိုလည်း ချပေးပါတယ် ကျနောတို့ပွဲလုပ်လို့မရပါဘူး ကယန်းစာပေ သင်တန်းဖွင့်ဖို့အတွက်လုပ်ထားပါတယ် လူစုလူဝေးမလုပ်ရတဲ့အတွက် ကျနောတို့မလုပ်ခဲ့ပါဘူး ကယန်းစာပေသင်တဲ့ ဆရာဘဆရာမတွေကို မွမ်းမံသင်တန်းလုပ်ဖို့ လျာထားတာ ချပေးပါတယ် ဒါပေမယ့် ကျနောတို့ ဘာမှလုပ်လို့ မရဘူးဖြစ် နေပါတယ်။ ပြန်ပေးမယ့်အပိုင်းက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စိုက်ထားတာပြန်ပေးပါတယ် နောက်တခါ လူစုလူဝေးမဟုတ်တဲ့ကိစ္စ တွေပြန်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ level 1စာအုပ်ထုတ်ဖို့ ခြောက်ဖွဲ့လျာထားပါတယ် အဲ့ဒီစာအုပ်ထုတ်ဖို့ အတွက် ပစ္စည်းဝယ်ဖို့အတွက် ကတော့ဝယ်လို့မရဘူး ခေါင်းစဉ်ပြောင်းပြီးတင်ထားတာ လုံးဝမပေးပါဘူး။” လို့ ဦးခွန်းထက် က ပြောပါတယ်။
၂၀၁၉-၂၀၂၀ အတွက် ဘတ်ဂျက်ကိုတော့ ၃လစာသာ ကြိုတင်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလ အထိ ခြောက်လစာကို ကြိုတင်မထုတ်ပေးတဲ့အတွက် အရင်းနှီးရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဆီ အတိုးမဲ့ချေးယူထား တာဖြစ်ပါတယ်။ ကယားပြည်နယ်တွင် တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီတွေ ခွဲဝေသုံးစွဲခွင့်ဘတ်ဂျက်ငွေတွေကို နောက်ကျထုတ် ပေးတဲ့အတွက် ကော်မတီလုပ်ငန်းတွေကို တခြားငွေချေးပြီးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရလို့ အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ ခဲ့ကြ ရပါတယ်။ ကယောတိုင်းရင်းသားစာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအနေနဲ့ဆိုရင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် သိန်း၃၀၀ သုံးစွဲ ခွင့် ပြုထားပေမယ့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် လူစုလူဝေးဖြစ်စေမယ့်ကိစ္စတွေကို ခွင့်မပြုတော့ဘဲ ရိုးရာပစ္စည်းဝယ်ယူဖို့ အတွက် သာ ငွေကြေးသုံးစွဲခွင့်ပြုထားပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားစာပေ အဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့ကနေ ထပ်မံထုတ်ယူဖို့ ကျပ် တစ်ရာလေးဆယ် သုံးသန်းကျော်ကို ထုတ်ယူဖို့ကျန်ရှိနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းအကောင်အထည်အဖော်ဖို့ ဘတ်ဂျက်အချိန်မှီမချပေးရခြင်းမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်(စ်) ကပ်ရောဂါကြောင့် လုပ်ဆောင်မည့် အခန်းအနားတွေ ၊ နေ့ထူးနေ့မြတ်အခန်းအနားတွေကို မပေးတော့တာပဲ တခြား စာပေ လုပ်ငန်းတွေမှာ လိုအပ်တာတွေသုံးဖို့ ဘတ်ဂျက်ကို ပြောင်းသုံးဖို့ ချပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ဗမာတိုင်းရင်းသား ရေးရာ ဝန်ကြီး ဦးလှမျိုးဆွေက ပြောပါတယ်။ ယခု အသုံးပြုဖို့ ကျန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတော့ လာမည့်ဘတ်ဂျက်နှစ်မှာ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ စီစဉ်ပေးသွားမှာပါလို့လည်း ဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု အသုံးစရိတ် အတွက် ဘတ်ဂျက်ကို ကယားပြည်နယ်တစ်ခုတည်းသာ ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ https://www.bnionline.net/mm/news-
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဘဝမှ နိုင်ငံရေးသမားအဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြိုင်ရာတွင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရန်အတွက် အုပ်ချုပ် ရေးမှူးအဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ထားပြီးဖြစ်သည်ဟု ဖားအံမြို့နယ်၊ ကော့ထော်ကျေးရွာအုပ်စု (တောင်ကလေး) အမျိုးသမီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နန်းခင်မသက်မာဝင်းက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။ “ကျမတို့ကတော့ ကင်းရှင်းတယ်။ သူတို့ကကျတော့ (ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ) ပါတီအရောင်ပြပြီးတော့မှ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဘတ်ဂျက်နဲ့ သွားတာတွေ၊ ပေးတာတွေ သူတို့ကို ပိုအကောင်းမြင်အောင် လုပ်ဆောင်နေကြတာ တွေ့ရတယ်။ ပါတီနိုင်ငံရေး ကင်းရှင်းရမယ်ဆိုတာ အုပ်ချုပ်ရေး အချင်းချင်း တူတာတောင်မှ သူတို့နဲ့ ကျမတို့ မတူတာ တွေ့ရတယ်”ဟု နန်းခင်သက်မာဝင်းက ပြောသည်။
တောင်ကလေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟု လူသိများသည့် နန်းခင်သက်မာဝင်းသည် အဆိုပါတာဝန်ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကရင်ပြည်နယ် အမှတ် ၇ (ဖားအံ -၂) တသီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ် လောင်းအဖြစ် အမည်စာရင်း မတင်သွင်းမီ အချိန်ထိ ၈ နှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် ကာလအတွင်း ဖားအံမြို့နယ်၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဆင့်ခေါ်ကာ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး မှူးများသည် ပါတီနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းရမည်ဆိုသည့် ခံဝန်ကတိကို ၂ ကြိမ် တိုင်လက်မှတ်ထိုး ပေးခဲ့ရဖူးသည်ဟု သူမက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။ ထို့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ဆုံးဖြတ် လိုက်သည့်အခါ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ပြီး ခရိုင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံ အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့ ကြောင်း၊ အမည်စာရင်းတင်သွင်းရာတွင် ခရိုင်ကော်မရှင်က အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားကလူများလည်းနုတ်မထွက်ဘဲ ရွေးကောက် ပွဲ ဝင်နိုင်သည်ဟု ညွှန်ကြားစာရှိ ထားကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
တောင်ကလေး အမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း နန်းခင်သက်မာဝင်း ဝင်ပြိုင်မည့် ပြည်နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော် အမှတ် ၇ တွင် သူမနှင့်အတူ ပါတီအသီးသီးမှကိုယ်စားလှယ် ၇ ဦးဝင်ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ http://kicnews.org/2020/09/% e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%84% e1%80%b 9%e1%80%b8%e1%
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ကူးစက်မှု များပြားနေသော ကာလ ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ် ရွှေလောင်းတင်ကျေးရွာအတွင်း စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ အချိန်က လက်နက်ကြီး ကျရောက်ပေါက်ကွဲသည့်အတွက် ရွာသား ၁ ဦး သေဆုံးပြီး ၂ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါ သေဆုံးသူမှာ အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ် ဦးမောင်မောင်ချေ ဖြစ်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသူများမှာ အသက် ၆၀ အရွယ် ဦးလှထွန်းမောင်နှင့် အသက် ၇၀ အရွယ် ဒေါ်လှစောနုတို့ ဖြစ်ကြောင်း ရွှေလောင်းတင်ကျေးရွာမှ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဝင် တဦးက ပြောသည်။
ရသေ့တောင်မြို့နယ် ရွှေလောင်းတင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ၃၀၀ ကျော်၊ လူဦးရေ ၁၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး ထိုသို့ လက်နက်ကြီး ရွာထဲသို့ ကျရောက် ပေါက်ကွဲသည့်အတွက် လက်ရှိအချိန်တွင် ရွာလုံးကျွတ် နီးပါး ထွက်ပြေးနေရကြောင်း၊ ယနေ့ မနက် ပိုင်းက ကျေးရွာအနီးတွင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခြင်း မရှိဘဲ ရသေ့တောင် တပ်ရင်း ၊ စစ်တွေ ပါဒလိတ်တပ်ရင်း၊ မေယုမြစ် အတွင်း လှည့်လည်နေသော တပ်မတော်စစ်ရေယာဉ်များမှ လက်နက်ကြီးများ ပစ်ခတ်မှုများရှိခဲ့ပြီးနောက် ကျေး ရွာ အတွင်း သို့ လက်နက်ကြီး ၂ လုံး ကျရောက်ပေါက်ကွဲခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။ ရသေ့တောင်မဲဆန္ဒနယ်မှ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်လတ်က “ရွာသားတွေ ပြောပြချက်အရတော့ ရသေ့တောင် တပ်ရင်းဘက်က ပစ်တာလို့ပြော တာရှိတယ်။ စစ်တွေ ဘက်ကနေလည်း လှမ်းပစ်တာရှိတယ်။ ရွာထဲကို ပထမဆုံးကျတဲ့ လက်နက်ကြီးထိလို့ ရွာသား တယောက်ဆုံးတယ်။ တိုက်ပွဲဖြစ်လို့ လှမ်းပစ်တာလည်း။ အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်တာလား ဆိုတာတော့ ပစ်ခတ်မှု အခြေ အနေကို တိတိကျကျ မသိဘူး။ ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရွာသားများ၏ စွပ်စွဲပြောဆိုချက်များ အပေါ် မေးမြန်းနိုင်ရန် ဧရာဝတီမှ တပ်မတော်သတင်း ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းသန်းအား ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း ဆက်သွယ်၍ မရှိခဲ့ ပေ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/09/17/ 230042.html
၈။ သီပေါ-နမ့်လန် လမ်းဘေးတွင်အမျိုးသားတဦး အလောင်းတွေ့
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း သီပေါမြို့နယ် သီပေါ-နမ့်လန် ကားလမ်းဘေးတွင် သေနတ်ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးနေသည့် အမျိုးသား တဦး အလောင်း တွေ့ရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။
အဆိုပါ သီပေါမြို့နယ် နမ့်ပုံ့ပ ကျေးရွာအကျော် သီပေါ-နမ့်လန် ကားလမ်းဘေးတွင် သေနတ်ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးသည့် အမျိုးသားကို မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းမှ လာရောက်ပစ်ခတ်သွားသည်ကို မသိရှိကြောင်း၊ လက်ရှိမှာ သီပေါရင်ခွဲရုံသို့ ပို့ဆောင်ထားကြောင်း သီပေါမြို့ နယ်စည်းမခြား ပရဟိတ မှ ကိုမျိုး က သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။ “ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ကို ရဲစခန်းက နေ့လည် ၁၁ နာရီခွဲလောက်မှာ ဖုန်းဆက်လာတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ကျနော်တို့အလောင်းသွားသယ်ခဲ့တယ်။ သေနတ်ဒဏ်ရာက ၂ချက်ပါ။ လက်ဖျံနဲ့ ရင်အုံမှာပါ”ဟု ကိုမျိုး ကပြောသည်။ သေနတ်ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးသည့် အမျိုးသား ၏ နေရပ်လိပ်စာကို လက်ရှိ အချိန်ထိ မသိရှိသေးပေ။
ထို သီပေါ-နမ့်လန် ကားလမ်းဘေးတွင် တကြိမ်တခါမှ ယခုကဲ့သို့ အမှုမဖြစ်ဖူးကြောင်းလည်း သီပေါဒေသခံများက ပြော သည်။“ ဘာကြောင့် သေနတ်ပစ်ခံရတယ်ဆိုတာကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာက စုံစမ်းနေဆဲပါ။ အဲ့နေရာကတော့ တခါမှ မဖြစ်ဖူး ဘူး”ဟု သီပေါဒေသခံ အမျိုးသားတဦးက ပြောသည်။ သီပေါမြို့နယ် အတွင်း သြဂုတ် (၂၄)ရက်တွင် အမျိုးသား ၃ ဦး သေနတ်ပစ်သတ်ခံရပြီး၊ ဧပြီလတွင်လည်း မိသားစုဝင် ၅ဦး ပစ်သတ်ခံရပြီး ယနေ့ချိန်ထိ အမှုမှန် မပေါ်သေးပေ။ https: //burmese.shannews.org/archives/18488
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်ခရိုင်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်နှင့် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိ တိုင်ရင်းသား လက်နက် ကိုင်များ ထိန်းချုပ်သည့် နယ်မြေများရှိ ကျေးရွာများတွင် ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်သေးကြောင်း ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဌေးအောင်က ကေအိုင်စီသို့ စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ပြောသည်။ “၂၀၁၅ အတိုင်းပဲ၊ ကော့ရိတ် ကတော့ မထူးခြားဘူး။ ကော့ကရိတ်မှာ မလုပ်နိုင်တဲ့ ရွာကြီး ၇ ရွာရှိတယ်။ အံကောင်းတို့၊ အံဖကြီးတို့ မလုပ်နိုင်ဘူး” ဟု ခရိုင်ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဌေးအောင်က ပြောသည်။
လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်း မဲရုံ ၁၂၃ ရုံ ထားရှိသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကြာအင်း ဆိပ်ကြီးမြို့ နယ်တွင် မဲရုံ ၁၂၀ ထားရှိသွားရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု ခရိုင်ကော်မရှင်ထံမှ သိရသည်။ “ရွာမှာတော့ ဒီတခါမလုပ်ဖြစ်ဘူး။ ကော်မရှင်က သူတို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မထားနိုင်တော့ လုပ်ခွင့်မပေးဘူးလေ” ဟု ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အုပ်ချုပ် ရေးမှူး(ကေအန်ယူက ခန့်အပ်ထားသူ) မန်းမြအေးက ပြောသည်။ ယခုလို ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်နယ်မြေများတွင် ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်သော်လည်း ကြာအင်းဆိပ်ကြီး မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာအချို့တွင်မူ မဲပေးနိုင်ရေး စီစဉ်ထားသည်ဟု ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ထံမှ သိရသည်။
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်ခရိုင်အတွင်းရှိ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်နှင့် ကြာအင်းဆိပ်ကြီး မြို့နယ်များသည် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၊ တပ်မဟာ (၆)၊ ဒူးပလာယာခရိုင်အတွင်း ပါဝင်ကာ ယခုလို ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်နိုင်သေး သော်လည်း ခရိုင်အတွင်းမဲဆွယ်မည့် ပါတီများကိုမူ ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေး ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်အညီ မဲဆွယ်ရမည်ဟု ဒူးပလာယာခရိုင်က စက်တင်ဘာ ၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ထားသည်။ http://kicnews.org/2020/09/ %e1%80%b 1 %e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%b7%e1%80%80%e1%
ချင်းပြည်နယ် ကျီခါးမြို့တွင် စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်က ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ZCD ပါတီအနေဖြင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးပြုလုပ်မည့် ကျီခါးမြို့သို့ ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဝင်လူငယ်များက ဆိုင်ကယ်အစီးရေ ၅၀ ဖြင့် တွန်းဇံမြို့မှသွားရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ကြောင်း တီးတိန်မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးပင့်ကမ်းလျန် က ပြောကြားသည်။“ဒီနေ့က တွန်းဇံကနေ ကျီခါးအထိ ဆိုင်ကယ်နဲ့ သွားနေကြပြီ။ ဆိုင်ကယ်အစီး ၅၀ လောက်သွား ပါတယ်။ တွန်းဇံက သွားတာကတော့ လူငယ်တွေပါပဲ။ ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ ကျီခါးမှာစောင့်နေပါတယ်။ ကျီးခါး ရောက်ရင် လူစုခွဲပြီးတော့ ရွာအလိုက် စည်းရုံးရေးဆင်းမှာပါ” ဟု ဦးပင့်ကမ်းလျန်က ဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် ချင်းပြည်နယ်အတွင်း လမ်းများမှာ မြေပြိုမှုဖြစ်ပွားနေသဖြင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆင်းမရသည့် ရွာများလည်းရှိ ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ “လောလောဆယ်တော့ တချို့ရွာတွေသွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ လမ်းတွေ မြေပြို တော့လည်း သွားလို့မရတာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ တစ်ချို့နေရာတွေက ကားသွားလို့ကိုမရတာ။ ဆိုင်ကယ် လောက်ပဲ သွားလို့ရတယ်။ ဒီလို အခက်အခဲတွေတော့ ရှိတယ်” ဟု ဦးပင့်ကမ်းလျန်က ပြောကြားသည်။ https:// news-eleven.com /article/192610
ကနေ့မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ဓါတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ နေ့စဉ်ရာနှင့်ချီတိုးလာနေသည်ဖြစ်ရာ လူထု ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကင်းဝေးစေရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော်က ၄င်းထိန်းချုပ်လှုပ်ရှား ရာနယ်မြေများအတွင်း ဂိတ်ပြန်ထောင်ကာ အ၀င်အထွက်သွားလာနေသူများအား စစ်ဆေးမှုပြုနေကြောင်းသိရသည်။
စက်တင်ဘာလဆန်းကတည်းကစပြီး RCSS/SSA ထိန်းချုပ်လှုပ်ရှားသည့် သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ၊မြောက်ပိုင်း၊အရှေ့ပိုင်း အတွင်း မြို့နယ်များတွင် ကိုဗစ် ၁၉ကာကွယ်ရေးအတွက်ဒေသခံလူထုအား ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးမှုစခန်းများ ပြန်လည် ထားရှိလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း RCSS/SSA ပြောခွင့်ရ ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး အုမ်ခေး က သျှမ်းသံတော်ဆင့်အားပြောသည်။ “ဒုတိယ လှိုင်းကြောင့်ရောဂါကူးစက်မှု မရှိအောင် မြို့အ၀င်အထွက်တွေမှာကျနော်တို့သွားပြီး ဂိတ်ထောင်စောင့်စစ်ပေးတယ်။
အရင် ကိုဗစ်စစကူးတုန်းက လုပ်သလိုပေါ့။ ရောဂါကြောင့် အခက်အခဲတော့ ရှိကြမှာဘဲနော့။ ဒါမယ့်ကျနော်တို့ ထိခိုက် နစ်နာ အောင်တော့မလုပ်ဘူး။ မြို့တိုင်းကိုဗစ်ကင်းစင်ဖို့အတွက်ပါ။ ” ထိုသို့ RCSS/SSA မှ စစ်ဆေးမှုသည် သွားလာ နေသော ဒေသခံလူထုအတွက် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာစေသဖြင့် လျှော့ပေါ့ ပေးရန် တအာင်းအမျိုးသားပါတီ TNP က တောင်းဆိုလိုက်သည်။ TNP ပါတီဉက္ကဌမိုင်းနုမ်ဟန် က- “ကျနော်တို့မိုင်းကိုင်မြို့ ရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသဘက်မှာ နေထိုင်တဲ့ ဒေသခံလူထု သွားရေးလာရေးအတွက်အခက်အခဲဖြစ်စေတယ်။ မြို့ဈေးဆင်းပြီး လှူဖို့ဒါန်းဖို့ စားသောက်ဖို့အတွက် ၀ယ်စရာ ခြမ်းဖို့တောင်မှ ခွင့်မပြုတော့ အခက်အခဲဖြစ်တာပေါ့။ တချို့လည်း ဆွေမျိုးမိဘ ဆုံးတာတောင် မသွားနိုင်ဘူး။ အရင်က လည်းဒါမျိုးလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလောက်အထိ မကြပ်ဘူး။ ခုလည်း ရွေးကောက်ပွဲအတွက်စည်းရုံးရေးဆင်းချိန်ဖြစ် နေတော့ စစ်ဆေးတင်းကြပ်မှုနဲနဲလျှော့ပေါ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်”- ဟု ပြောဆိုသည်။ https://burm ese.shannew s.org/archives/18485
ချင်းပြည်နယ်တွင်လူဦးရေအများဆုံးဒေသဖြစ်သည့် ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် လာမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကျေးရွာအုပ်စု ပေါင်း (၉) အုပ်စုမှ ဒေသခံများ ပါဝင်နိုင်ခြင်း ရှိမည်မဟုတ်ဟု ပလက်ဝမြို့နယ်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နေရာတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့စည်ပင်ဝန်ကြီးဦးစိုးထက်ထံမှ သိရသည်။ စည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်က “ရန်သူစိုးမိုးမှုရှိတဲ့ ရွာတွေကိုတော့ သွားလို့မရနိုင်ဘူး။ လောလောဆယ် ပလက်ဝမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ ကျေးရွာ ၉ အုပ်စု လောက်က ရွေးကောက်ပွဲမှာ မပါဝင်နိုင်လောက်ဘူးလို့ မှန်းထားတယ်” ဟုပြောသည်။
လက်ရှိနယ် မြေအခြေအနေအရ ပလက်ဝမြို့နယ်တွင်ရှိသော ကျေးရွာ ကိုးအုပ်စုတွင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ အဝင်အထွက် ရှိသည်ဟု သတင်းရရှိသော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိကို ဆုံးဖြတ်၍ မရသေးကြောင်း ချင်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အရာရှိ ဦးလင်းကျော်က ပြောသည်။ ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အရာရှိ ဦးလင်းကျော်က “မကျင်းပနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်း ကျန်တဲ့အုပ်စုက ကျင်းပနိုင်ရင် ကျန်တဲ့အုပ်စု ကျင်းပခြင်းအားဖြင့် သူတို့အုပ်စုအတွက်ပါ ဒီကိုယ်စားလှယ်က တာဝန်ယူသွားတော့မှာ ဖြစ်တဲ့တွက် မကျင်းပနိုင်တဲ့ အုပ်စုကလည်း ပြဿနာ အခက်အခဲတော့ မရှိဘူးပေါ့”ဟု မှတ်ချက်ပြုသည်။
ပလက်ဝမြို့ပေါ်နှင့် ဆမီးမြို့တို့တွင် ရှိသော စစ်ဘေးရှောင်များကို ပုံစံ ၃ (က) များလျှောက်ပြီး ရွေးကောက် ပွဲတွင် ပါဝင်နိုင်ရန် တာဝန်ရှိသူများမှ ဆောင်ရွက်ပေးနေလျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ အုပ်စုပေါင်း ၁၀၂ အုပ်စုရှိပြီး ၎င်းကျေးရွာ အုပ်စုထဲမှ ကျေးရွာကိုးအုပ်စုမှာပါဝင်နိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအချို့က ခန့်မှန်းကြသည်။ လက်ရှိ စည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်မှာ လာမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ပလက်ဝမြို့နယ် အမှတ် ၁ မဲဆန္ဒနယ်မှ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-75576
လက်ရှိ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် အစိုးရကို အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းမှု အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရ သည်ဟု ပြည်ထောင်စု ကြံခိုင်ရေးနှင် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုယ်စားပြု ဖားအံမြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၂ ကိုယ်စား လှယ်လောင်း နန်းနီနီအေးက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။ သူမသည် ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နှင့် လက်ရှိ ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ အမှတ် ၆ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသူတဦီးလည်း ဖြစ်သည်။
“ကျမက လွှတ်တော်သက်တမ်း ၂ ကြိမ် ဆက်တိုက်ဆိုတော့ ကွာခြားချက်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။ ဒီသက်တမ်းအတွင်း မှာတော့ အရင်ကလောက် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်မရတာတွေ၊ မေးခွန်းတွေဆိုလည်း ပိတ်ပင်ခံရ တာမျိုးတွေ၊ လွှတ်တော်ထဲမှာ တချို့ကိုယ်စားလှယ်ဆွေးနွေးတဲ့ဟာတွေဆို ပြန်ပြီးတော့ တားမြစ်ကန့်သတ်တာတို့၊ အစိုးရရဲ့ အခက်ဖြစ် စေမယ့်ဟာတွေ မဆွေးနွေးဖို့တို့၊ သူတို့ပြောတာတွေ ပြန်ကြားရ တွေ့ရတာ ပေါ့နော်”ဟု ကေအိုင်စီနှင့် သီးခြားတွေ့ဆုံ မေးမြန်းရာတွင်သူမက ပြောသည်။
ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီကိုယ်စားပြု ကရင်ပြည်နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နန်းနီနီအေးသည် ပြီးခဲ့သည့် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ နှစ်ကြိမ်ဆက် အနိုင်ရသည့် ပြည်နယ်၏ တဦးတည်းသော အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်ကာ လာမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်နယ်အရေး ပိုလုပ်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဖားအံမဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၂ တွင် ဝင်ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ http://kicnews.org/2020/09/%e1%80 %9c%e1%82%8a%e1%80% 90%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ရှမ်းစစ်ဘေးရှောင်များအနေဖြင့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးချင်သော် လည်း အထောက်အထား တစ်စုံတစ်ရာ မရှိသည့်အတွက် မဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးနေဦးမည်ဟု ရှမ်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှ တာဝန်ရှိသူနှင့် စစ်ရှောင်များက ပြောသည်။
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တွင် ရှမ်းIDPs စစ်ရှောင်စခန်း ၅ ခုနှင့် Refugee ဒုက္ခသည်စခန်း ၁ ရှိပြီး အဆိုပါ စခန်းများရှိ ဒုက္ခသည်များမှာ နိုင်ငံသားဖြစ်လျက် အထောက်အထားတစ်စုံတစ်ရာမရှိသည့်အတွက် မဲပေးနိုင်မည့် အလားအလာ မရှိသလောက်ဖြစ်နေသည်ဟု ကုန်းကျော် ဒုက္ခသည်စခန်းမှ စခန်းတာဝန်ခံလည်းဖြစ် ရှမ်းစစ်ဘေး ဒုက္ခသည်များ ကူညီရေး ကော်မတီ (ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်) ကော်မတီဝင်လည်းဖြစ်သည့် စိုင်းလင်းက ပြော သည်။ အထောက်အထား တစ်စုံတစ်ရာ မရှိသော်လည်း မဲပေးခွင့်ရှိမည်ဆိုပါက မဲပေးသွားမည်ဟု စိုင်းလင်း က ဆက် ပြောသည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မြန်မာဖက်ခြမ်းရှိ ရှမ်း IDPs စစ်ဘေးရှောင်စခန်း ၅ ခုမှာ ကောင်းမုမိန်း၊ လွယ်ဆမ် စစ်(ပ်)၊ လွယ်လန်၊ လွယ်တိုင်းလျန်း နှင့် လွယ်ကော်ဝမ်းတို့ဖြစ်ပြီး ထိုင်းဖက်ခြမ်းရှိ Refugee ဒုက္ခသည် စခန်းမှာ ကုန်းကျော် စခန်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ ထိုစခန်း ၆ ခုရှိ လူဦးရေ ခြောက်ထောင့်နှစ်ရာ ခန့်မှာ လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးခွင့် ဆုံးရှုံးမည့် အနေအထားတွင် ရှိနေသည်ဟု ရှမ်းစစ်ဘေး ဒုက္ခသည်များ ကူညီရေး ကော်မတီ (ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်) ဆိုသည်။
ရှမ်းစစ်ဘေးရှောင် IDPs များနှင့် Refugee ဒုက္ခသည်များ မဲပေးခွင့် မရှိသည့် အခြားတစ်ဖက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့် ရှမ်းရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ မဲပေးခွင့်ရရှိအောင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် SNLD က ထိုင်းနိုင်ငံရှိ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု SNLD အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် စိုင်းလိတ်က ပြောသည်။ နိုင်ငံသားများ ဖြစ်လျှက် နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်း တစ်စုံတစ်ရာ မရှိသည့် ဒုက္ခသည်များ မဲပေးခွင့်ရရှိအောင် ချိတ်ဆက်ပေးထားသော်လည်း အဆိုပါ ဒုက္ခသည်များ မဲပေးခွင့် ရှိ/မရှိ တာဝန်ရှိသူများအပေါ်တွင်သာ မူတည်သည်ဟု စိုင်းလိတ်က ပြောသည်။ https://www.bn ionline.net/mm/news-75561
Covid-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ကျောက်မျက်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများသည် ယခင်ထက် ဈေးနှုန်း ထက်ဝက်ချကာ ရောင်းချနေရသည်ဟု လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ သိရသည်။
မြစ်ကြီးနားမြို့ ဒေသထွက်ကုန်အရောင်းစင်တာများတွင် လာရောက်ကြည့်ရှု့သည့် လူဦးရေ လျော့နည်းသွားပြီး အရှုံးနှင့် ရင်ဆိုင်လာရကြောင်း အဆိုပါနေရာတွင် ကျောက်ပယင်းအရောင်း ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားသူ ဒေါ်တင်တင်နွယ်က ယခုလို ပြောဆို သည်။“ကျမတို့အစ ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်တုန်းကတော့ အနယ်အရပ်ရပ်က ခရီးသွားလာရေးအဖွဲ့တွေရှိကြတယ်။ သူတို့ အနေနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ကို လာရောက်တဲ့အခါမှာတော့ အသင့်သင့်ရောင်းရတယ်။ အခုကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်း ခရီးသွားလာရေး တွေကိုပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ လူတွေတိတ်ဆိတ်သွားတာဘဲ။ ဘယ်စင်တာမှာလည်း လူမရှိဘူး။ ဒီဈေးနှုန်းပိုင်းမှာလည်း ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်တုန်းက ၅သောင်းရောင်းလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကို အခုမရတော့ဘူး။ အခုဆို ၂ သောင်းလောက်အထိလျော့ပြီး ရောင်းနေရတယ်။ ကြာလာတော့ ဆိုင်ခန်းဈေးတွေနဲ့ဆို အရှုံးပေါ်လာနိုင်တယ်” ဟု ပြောဆိုသည်။
မြစ်ကြီးနား စက်မှုဇုန်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ကျောက်မျက်အရောင်းဌာနတွင်လည်း ဝယ်လက်အလွန်နည်းနေသည့်အပြင် ဈေးကွက်လည်း ကျဆင်းနေကြောင်း ကချင်ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း ဥက္ကဌ ဦးရိတ်နန့်ဇေလွမ်း က ပြောဆို သည်။“အဓိကတော့ ကိုဗစ်ကြောင့်ပြောလို့ရမှာပေါ့။ အခုဆိုရင်ကျောက်မျက်ဈေးကွက်တွေက ၄၀ရာခိုင်နှုန်း လောက်ကျ သွားတယ်။ အရင်တုန်းက သိန်းတစ်ရာလောက်ရတဲ့ ပစ္စည်းတွေဆိုရင် အခုဆို သိန်း ၆၀၊ ၅၀လောက် ဘဲရတော့တယ်။ ပြီးရင်လာဝယ်တဲ့ ဝယ်လက်လည်း အလွန်နည်းသွားတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေလည်း လာဝယ်ကြ တာ ပေါ့။ ပြည်တွင်းအထဲကဘဲ လာကြည့်ကြတယ်။ အဲ့တော့ ဝယ်နှုန်းအားလည်း ၄၀ရာခိုင်နှုန်းကျသွားတာပေါ့။” ဟုပြောသည်။ ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအနေနှင့် ကျောက်မျက်ဈေးကွက်ကို ပြည်တွင်းဈေးကွက်ဖြစ်ထွန်းရန် အတွက်နှင့် ဒေသခံပြည်သူများ လုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိလာအောင် လုပ်ဆောင်ပေးသင့်ကြောင်း သူကဆက်ပြောသည်။https://burmese.kachinnews.com/2020/09/17/covid19%e1%80%80%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80
ကရင်ပြည်နယ်တွင် ယခုနှစ် ရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့် ဖာလာအသီး အထွက်နည်းသည့်အပြင် ယခင်နှစ်ထက် ကျပ် ၃, ဝဝဝ အောက် ဈေးနှုန်းကျဆင်းသွားသည့်အတွက် ဖာလာစိုက်တောင်သူများ အခက်အခဲဖြစ်နေဟု ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
ယခင်နှစ်က ဖာလာသီးအခြောက် ၁ ပိဿာလျှင် ကျပ် ၁ဝ,ဝဝဝ ကျော်ရှိခဲ့ပြီး ယခုနှစ် အသီးပေါ်ချိန် ကျပ် ၇ဝဝဝ ဝန်းကျင် သာ ဈေးနှုန်းရှိ သည့်အတွက် အလုပ်သမားခများနှင့် စားဝတ်နေရေးဖြေရှင်းနိုင်ရန် ရသည့်ဈေးဖြင့်သာရောင်းနေရ သည်ဟု သံတောင်ကြီးမြို့ နယ် ဖာလာ စိုက်တောင်သူများက ပြောသည်။ “သီးနှံပေါ်စ ၇ ထောင်ဈေးနဲ့ဆိုရင် အလုပ်သမားခနဲ့ မကိုက်ဘူးပေါ့နော်။ ဝယ်တဲ့သူတွေလည်း ရွာအထိ မဆင်းလာကြသေးဘူး။ တစ်ချို့က ဝယ်သမားဆီ စားဝတ်နေရေး အတွက် ငွေကြိုယူထားရတယ်ပေါ့နော်။ အသီးပေါ်ချိန် ပြန်သွင်းတယ်။ မိုးရွာ နောက်ကျတော့ အသီးထွက်နည်း သွားတဲ့ အပြင် ကိုဗစ်ရောဂါကာလပါရှိနေတော့ ဈေးကဘယ်လိုဆက်ဖြစ်နေအုံးမလဲ မသိတော့ဘူး။” ဟု သံတောင်ကြီးမြို့နယ် မိုင် ၂ဝ ဒေသခံ စောစဲက စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် ကေအိုင်စီ သို့ပြောသည်။
သံတောင်မြို့နေ ဖာလာသီးဝယ်သူ နော်သီရိစံက “ ဈေးက အရင်နှစ်လို မဟုတ်ဘူး တအားလျော့တယ်။ ကိုဗစ်ကာလ ကြောင့် ဈေးနည်း သွားတာလည်း ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ မနှစ်တုန်းက ၁ သောင်းကျော်ရှိတယ်။ အခုဈေးက ၇,၀၀၀ ပဲရှိတယ်။ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲကြတော့ ရတဲ့ဈေးနဲ့ ရောင်းရတာပဲပေါ့နော်။ ဒီနှစ်ပိုဆိုးမယ်။ သူတို့ (ဝယ်သူ)ဝယ်ချင်တဲ့အချိန်မှ ဆင်းလာဝယ်ကြတာပါ။ ဒီချိန်ထိတော့ မလာကြသေး ဘူး” ဟု ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။ ဖားလာစေ့ကို စားသုံးကုန်များနှင့် ဆေးဝါးဖော်စပ်သည့် နေရာများတွင် အသုံးပြုကြသည်။ ပြည်တွင်းဝယ်လိုအားနည်းသည့်အတွက် ဖာလာစေ့ဝယ်ယူမှု များသည့် တရုတ်နိုင်ငံကိုသာ ဈေးကွက်အဓိက မီခိုနေရသည်ဟု ဖာလာစိုက်တောင်သူများထံမှ သိရသည်။ http://kicnew s.org/2020/09/%e1%80%96%e1%80%ac%e1%8 0%9c%e1%80%ac%e1%80%9e%e1%80
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့တွင် Covid-19 အတည်ပြု လူနာ ၄ ဦး ထပ်မံတွေ့ရှိကြောင်း ပြည်နယ် Covid-19 ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီမှ သိရသည်။ အဆိုပါ ပိုးတွေ့လူနာ ၄ ဦးသည် ဖားကန့်မြို့နယ် အေးမြသာယာအုပ်စု၊ တောင်ပြိုကျေးရွာမှ ပိုးတွေ့လူနာအမှတ်စဉ် (၁၇၁၂)ဖြင့် ထိတွေ့သူများဖြစ်ကြသည်။
“ဆရာတို့ ကနဦးသတင်းရရှိထားတာတော့ အမှန်ပါ ခုပိုးတွေ့တဲ့သူက လူနာအမှတ်(၁၇၁၂)နဲ့ ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေလို့ သိရတယ်။ လူနာအမှတ် ၁၇၁၂ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Contact Tracing လုပ်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဘဲ သိရသေးတယ်။ သူတို့ရဲ့ Case အမှတ်စဉ်တော့ မထွက်လာသေးပါဘူး။” ဟု ဒုညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင့်နိုင်ကပြောသည်။
လူနာအမှတ် ၁၇၁၂ နေထိုင်ခဲ့သည့် တောင်ပြိုရွာကို စက်တင်ဘာလ ၁၁ရက်နေ့မှစကာ Lock Down သတ်မှတ်ထားပြီး ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သူ ၂၀ ဦးကို သတ်မှတ်ထားသည့် Quarantine Center များတွင် Facility Q ထားပြီးနောက် (SWAB) များယူကာ စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ လူနာအမှတ် ၁၇၁၂ သည် စစ်တွေမြို့မှ ဖားကန့်မြို့ တောင်ပြိုကျေးရွာသို့ သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ ဖားကန့်မြို့ရှိ သီတာဂူစက္ခုဒါနဆေးရုံတွင် Q ထားရှိသူဖြစ်သည်။ https://bu rmee.kachinnews.com/2020/09/17/%e1%80%96%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%80%e1
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြို့နယ်ရှစ်မြို့နယ်ရှိ အသွားအလာ ကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ရေး (quarantine) စင်တာများတွင် အသွား အလာကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ခံနေရသူများအတွက် အသင့်စားသုံးနိုင်သော အာဟာရပြည့် စားနပ်ရိက္ခာ များကို ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ (WFP) က တစ်ရက်လျှင် သုံးနပ်စာ ထောက်ပံ့သွားမည် ဖြစ်သည်။ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် WFP တို့ ယခုကဲ့သို့ ပူးပေါင်း ကူညီထောက်ပံ့ရန် စက်တင်ဘာလ ပထမပတ်က သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ချက်အရ ဖြစ်ကြောင်း WFP ၏ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဩဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့မှစ၍ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဒေသတွင်း COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်မှုသည် စစ်တွေမြို့ကို ဗဟိုပြု၍ များပြားလာခဲ့ပြီးနောက် စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ကိန်းဂဏန်းများအရ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လူ ၁၅၀၀ ခန့် သည် အစိုးရက ဖွင့်လှစ်ထားသော quarantine စင်တာများတွင် အသွားအလာ ကန့်သတ်မှု ခံယူနေရသည်။“ရခိုင် ပြည်နယ်မှာရော မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တခြားဒေသတွေမှာပါ စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ အာဟာရ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေး နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာ အကူအညီလိုအပ်သရွေ့ အခုထက်ပိုပြီး ပါဝင်ကူညီပေးနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ အဆင်သင့်ပါပဲ”ဟု WFP ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ စတီဖင်အန်ဒါဆင်က ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပြောထားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ quarantine စင်တာ ရှစ်ခုမှာ ကျောက်ဖြူ၊ ကျောက်တော်၊ စစ်တွေ၊ ပေါက်တော၊ မင်းပြား၊ မြေပုံ၊ မြောက်ဦးနှင့် အမ်းမြို့နယ်တို့တွင် တည်ရှိသည်။ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် WFP သည် နေရပ်စွန့်ခွာသူများနှင့် ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများကို ရခိုင်ပြည်နယ် အလယ်ပိုင်းတွင် လူဦးရေ ၂ သိန်းနီးပါးနှင့် ရခိုင်ပြည် မြောက်ပိုင်းတွင် လူဦးရေ ၁ သိန်းခန့်တို့ကိုလည်း လစဉ် ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ http://www. mizzimaburmese.com/article/73492
တောင်ကြီး – ဟိုပုံး ပြည်ထောင်စု လမ်းမပေါ်ရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ် တားဆီးရေး စစ်ရေးဂိတ်မှာ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေစဉ် မူးယစ်ဆေးဝါး ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
စက်တင်ဘာ (၁၇) ရက် နေ့လည် ၁၂ နာရီဝန်းကျင် တွင် ဟိုပုံးမြို့အဝင် တိုးဂိတ်အနီးရှိ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးဂိတ်၌ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးနေစဉ် ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်လာသည့် ဆယ်ကျော်သက် အရွယ် အမျိုးသား (၂) ထံ WY စာတန်းပါ ပန်းရောင် စိတ်ကြွဆေးပြား ၂၂ ပြား ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း ဟိုပုံးဂိတ်မှာ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်နေသည့် စေတနာ့ ဝန်ထမ်း တစ်ဦးထံ သိရသည်။“ဆိုင်ကယ် အတူစီးလာတာ ၂ ယောက် ဆိုင်ကယ် မောင်းတဲ့သူ က ထွက်ပြေးသွားတာပေါ့ နော်။ တစ်ဦးပဲ ဖမ်းမိတယ်” ဟု စေတနာ့ ဝန်ထမ်း ကိုကောင်းခန့်ကျော် က ပြောသည်။
အဆိုပါ ဟိုပုံး ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးရေးဂိတ်သည် ၂၄ နာရီ ခရီးသွားပြည်သူများကို စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ထောက်ခံစာ ပါမှသာ မြို့တွင်းသို့ ဝင်ခွင့် ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “ထောက်ခံစာ မပါပဲနဲ့ရောက်လာတာ။ သူတို့ လွယ်အိတ်ထဲမှာ ဓားပါတယ်။ အဲ့ဒါ ကျနော်တို့က အဲ့ဓားကိုပဲ အရင်ဆုံး စမြင်တာပါ။ အဲ့ဓားကို စမြင်တော့ အဲ့ဓားကို ထုတ်ခိုင်းတာ ဓားကို ထုတ်တဲ့ချိန်မှာ လွယ်အိတ်မှာထဲ ဆေးတွေ ထွက်လာတာ” ဟု ကိုကောင်းခန့်ကျော် ကပြောသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး ဖမ်းဆီးရမိသည့် အမျိုးသားသည် အသက် ၁၈ ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီး ဟိုပုံးမြို့နယ် တုံခမ်းရပ်ကွက် က ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ ထိုလူငယ်ကို တောင်ကြီးမြို့မရဲစခန်း လက်ထဲသို့ အပ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ https://bur mese.s hannews.org/archives/18498
၂၀။ COVID-19 ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ KNC ပါတီက မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများ ပြုလုပ်နေပြီး နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်နိုင်ဟု KNC ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ပြောကြား
COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ကချင်အမျိုးသားကွန်ဂရက် KNC ပါတီက မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများ ပြုလုပ်နေပြီး နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်နိုင်ကြောင်း KNC ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ Mကောန်လက ပြောကြား သည်။ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်က COVID-19 အတည်ပြုလူနာလေးဦး တွေ့ရှိကြောင်း သတင်းရသည့်အတွက် ၎င်းတို့ပါတီ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့၏ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်ကြရန် ပြောကြားထားကြောင်း ဒေါက်တာ M ကောန်လက ပြောကြားသည်။
KNC ပါတီ ကိုယ်စားပြု၍ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအနေဖြင့် မဲဆွယ် စည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုကြားသို့ လူစုလူဝေးဖြင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်းများ မပြုလုပ်ကြရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားသည်။ ထို့ပြင် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသည့် COVID-19 ရောဂါသည် အောက်တိုဘာ တွင် ရောဂါပြန့်ပွားမှု အရှိန်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ မဖြစ်နိုင်ကြောင်းလည်း ဒေါက်တာ M ကောန်လက ဆိုသည်။“အဲဒီတော့ အခုက ဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ တွေ့တော့တွေ့ရမှာဖြစ်နေတယ်။ ဒီကိစ္စ အခု UEC ကလည်း ပြတ်ပြတ်သားသား ဘာမှမပြောဘူး။ အမှန်ကတော့ Tempo အရဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ခန့်မှန်း တာက အောက်တိုဘာလဆိုရင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်လာမှာလေ။ အမြင့်ဆုံးဖြစ်လာမှာ အဲဒီတော့ ဘယ်လိုမှ နိုဝင်ဘာ ၈ က မဖြစ် နိုင်ဘူးဗျာ။ ဒါ အမှန်ပဲ။ အဲဒါ သူတို့ မြန်မြန်ထက်ထက်လုပ်သင့်တယ်”ဟု KNC ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ M ကောန်လက ပြောကြားသည်။
ကချင်အမျိုးသားကွန်ဂရက် KNC ပါတီအနေဖြင့် လာမည့် ၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မဲဆန္ဒနယ်မြေ ၁၇ နေရာနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း မဲဆန္ဒနယ်မြေ သုံးနေရာ စုစုပေါင်း မဲဆန္ဒနယ် ၂၀ တွင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သွား မည်ဖြစ်သည်။ https://news-eleven.com/article/192 780
လက်ရှိကပ်ရောဂါကာလဟာ တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖို့ မဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP က ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲရေးအတွက် အရေးပါတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တာကြောင့် ဒီရွေးကောက်ပွဲ တရားမျှတမှုရှိဖို့ လက်ရှိ NLD ဦးဆောင်တဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရမှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်လို့ ANP ပါတီကပြောထားပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုနှုန်းတွေ တနေ့တခြား ဆိုးဆိုးလာနေတာကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲရက်ကို ရွှေ့ဆိုင်းပေးဖို့ ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအပါအဝင် ပါတီ ၂၀ ကျော်က စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုနှုန်း မြင့်နေတာကြောင့် မလိုအပ်ဘဲ နေအိမ်အပြင်မထွက်ကြဖို့ Stay at home အမိန့် အစိုးရ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ မြို့နယ်တွေက ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ် တွေဟာ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆင်းလို့ မရတာကြောင့် အွန်လိုင်းကနေပဲ မဲဆွယ်နေကြပါတယ်။ Stay at Home အမိန့် ထုတ်ပြန်မထားတဲ့ မြို့နယ်က ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ လူ ၅၀ ဦးထက်မပိုဘဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်ရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
လာမယ့် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ထားပြီး ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေကို စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ကနေ နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်နေ့အထိ တရားဝင် ခွင့်ပြုထားတာပါ။ https://www.rfa.org/burmese/news/2020-election-and-ANP-party-09162020140 808.html
သျှမ်းပြည်တောင်းပိုင်း ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ဆိုင်ခေါင်မှ အတည်ပြုလူနာ နှင့် ထိတွေ့ခဲ့သော သူတစ်ဦးသည် ကိုဗစ် ၁၉ ပိုးတွေ့ ရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ စက်တင်ဘာ ၁၈ ကျန်းမာရေးထုတ်ပြန်ချက်အရ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံရသူ (၂၅၆) ဦး ရှိပြီး၊ သေဆုံးသူ (၁)ဦးရှိကြောင်း၊ ထိုထဲတွင် ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ဆိုင်ခေါင် ကျေးရွာ မှ အသက် ၁၃နှစ် အရွယ် တဦး ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
“သူကဆိုင်ခေါင်ကဘဲ၊ ခရီးသွား ရာဇဝင်မရှိဘူး။ရောဂါ လကပတာတွေမရှိဘူး။ သူအဖေက အတည်ပြုလူနာ ဆိုတော့၊ သူအဖေနဲ့ ထိတွေ့ လို့ ပိုးတွေ့တယ်လို့ ဘဲယူဆရတယ်” ဟု သျှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ပြည်နယ် အထူးရောဂါ နှိမ်းနင်း ရေး လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာဇဝနကို က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။ ၎င်းပိုးတွေ့လူနာကို သျှမ်းပြည်နယ်တောင်းပိုင်း တောင်ကြီးမြို့ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံသို့ ပိုးဆောင်လာပြီး၊ထို သူနှင့် ထိတွေ့သူများကိုလည်း ပိုးစစ်ဆေးထားကြောင်း ဒေါက်တာ ဇဝနကို ကဆိုသည်။ အဆိုပါ ပိုးတွေ့လူနာ၏ မိသားစုများကို ဆိုင်ခေါင်တွင် Quaratine ဝင်ထား ကြောင်း သိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/18507
မြန်မာနိုင်ငံတွင်တကျော့ပြန်ဖြစ်ပွားနေသည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်(စ်)ခေါ် ကိုဗစ်ရောဂါဒုတိယလှိုင်းကြောင့် အားကစားနဲ့ ကျန်းမား ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မူ့များကြောင့် အတိုက်ခံပါတီများမဲဆွယ်ရာတွင် အခက်ကြုံနေရကြောင်း အတိုက်ခံ ပါတီများထံမှ သိရသည်။
ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် လက်ရှိအနိုင်ရပါတီများအတွက်မဲဆွယ်ရာတွင်အခက်အခဲမရှိသော်လည်း တိုင်းရင်းသားပါတီများ အတွက် ဇန်နဝါရီလမှစတင်ပြီး အခက်ကြံနေရကြောင်း ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ မိုင် Cherry Zahau ကဆို သည်။“ကျွန်မတို့ပါတီအားလုံးကတော့ အကုန်လုံးနှစ်နာနေပြီ၊ အထူးသဖြင့် ဇန်နဝါရီလကနေ ဧပြီလအထိ ဘာမှမလုပ် နိုင်ကြဘူး၊ (၄) လလုံးလုံးဘာမှမလုပ်နိုင်ကြဘူး၊ ဇ်ူလိုင်လကနေပဲ ကျွန်မတို့ နဲနဲပါးပါးလုပ်လာနိုင်တယ်၊ စက်တင်ဘာလ ကနေကတော့ လုပ်ရှားလို့ရမဲ့အချိန်မှာ အခုလို ဒုတိယလှိုင်းကထနေတော့ ချင်းပါတီအတွက် အရမ်းနှစ်နာနေတယ်၊ အနိုင်ရ ပါတီကတော့ လုပ်ရှားမူအများကြီးရှိနိုင်တယ်၊ ကိုဗစ်ကြောင့် အကူအညီကအစ လုပ်ရှားလို့ရတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်ကို သွားဖို့အဆင်သင့်ပြင်နေပေမဲ့ စစ်ရေးကြောင့်၊ကိုဗစ်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ မသွားနိုင်ကြဘူး၊ အဲဒါကြောင့် အရမ်းနှစ်နာနေတယ်” ဟုပြောသည်။
ထို့ပြင် ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရာတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွန်ချက်လိုက် နာရန် လိုအပ်သောကြောင့် ပါတီအသစ်များအတွက် ပိုပြီးကြိုးစားနေရကြောင်း စစ်ကိုင်းဒေသကြီး ကလေးမြို့နယ် ပြည်ထောင်စု ကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီမှ တိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာယှဉ်ပြိုင်မည့် ဦးထွန်းနိုင်ဝင်း(မင်းရဲစစ်နိုင်)က သုံးသပ်သည်။
အတိုက်ခံပါတီများက ကိုဗစ်ဒုတီယလှိုင်းကြောင့် ပါတီစည်းရုံးရေးဆင်းရာတွင် အခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့ရသည် ဆိုသော် လည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအနေဖြင့် ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကြိုးပမ်းမူကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရိုက်ခက်မူ့ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း ကလေးမြို့ ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အေးအေးမူကဆိုသည်။ သူက စည်းရုံးရေးကတော့ လောလောဆယ်ရပ်နားထားတယ်၊ ဘယ်တော့ပြန်စမလဲဆိုတာတော့ ပြောလို့မရသေးဘူး၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန ညွန်ကြားချက်အတိုင်းပါပဲ၊ ကျွန်မတို့ ပါတီကတော့ အဲလောက်ကြီး ရိုက်ခက်ခံရမယ်လို့တော့ မထင်ဘူး၊ ကျွန်တော့တို့ ကျေး ရွာတွေမှာ ပါတီအဖွဲ့ခွဲတွေရှိတယ်လေ၊ ကျန်းမားဝန်ကြီးဌာနညွန်ကြားချက်အတိုင်း ဆက်လုပ်သွားမှာပါ၊ ပါတီကိုတော့ ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကြောင့် ရိုက်ခေက်သွားမယ်လို့တော့ မထင်ဘူးဟု ပြောသည်။ https://www.chinwo rld.org/2020/09/17/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%8 0%af%e1%80%97 %e1%80%
မွန်ပြည်နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနရုံးက ဝန်ထမ်း ၈ ဦးအပါအဝင် စုစုပေါင်း ၁၁ ဦး ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကူးစက်ခံရတယ်လို့ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက် ညနေပိုင်းမှာ မွန်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ သစ်တောဦးစီးဌာနက ဝန်ထမ်း ၁ ဦးမှာ စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်က ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ တွေ့ရှိပြီးနောက် မွန်ပြည်နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနရုံးက ညွှန်ကြားရေးမှူး အပါအဝင် ဝန်ထမ်း အားလုံးကို ဓာတ်ခွဲနမူနာ စစ်ဆေးခဲ့ရာမှ ဝန်ထမ်း ၈ ဦး ကူးစက်ခံခဲ့ရတာပါ။
အခုအခါမှာတော့ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရတဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ ၁၁ ဦးနဲ့ ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူ ၅၀ ကျော်ကို ကွာရန်တင်း စင်တာ ပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ မွန်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ဒုပြည်နယ်ဦးစီးမှူး ဒေါက်တာဝတ်မှုံက ပြောပါတယ်။ ရောဂါကူးစက်ခံရသူတွေနဲ့ ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ မော်လမြိုင် သစ်တောဦးစီးဌာနရုံးကိုတော့ အသွားအလာ ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/411154
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရသေ့တောင်မြို့နယ်၊ ဦးဂါကျေးရွာမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သည့် တပ်မတော်သား ၃ ဦးကို ဥပဒေနှင့်အညီ ထိရောက်ပြင်းထန်စွာ အရေးယူနိုင်ရေးနှင့် ကျန်တာဝန်ရှိသူများအားလည်း စစ်စည်းကမ်းအရ အရေးယူ နိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ တွင် သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့က တပ်မတော်စစ်ကြောင်းတစ်ခုသည် ဦးဂါကျေးရွာသို့ သေနတ်ပစ်ဖောက် ဝင်ရောက်လာပြီး နောက် ည ၁၁ နာရီခန့်တွင် နေအိမ်၌ပုန်းခိုနေသည့် အမျိုးသမီးကို တပ်မတော်သားသုံးဦးက မှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးမည်ဟု အကြောင်းပြကာ နေအိမ်မှခေါ်ထုတ်သွားခဲ့ပြီး အနီးရှိ လူမရှိသောနေအိမ်တွင် အဓမ္မ ပြုကျင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကာယကံရှင် အမျိုးသမီးက သတင်းထောက်များကို ပြောဆိုထားသည်။ ထို့အပြင် ကလေးမွေးဖွားပြီး (၆)ရက်သာရှိသေးသည့် အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် သမီးဖြစ်သူကိုလည်း စစ်ဆေး စရာရှိသည်ဟုဆိုကာ နေအိမ်ပြင်သို့ခေါ်ထုတ်သွားခဲ့ပြီးနောက် အဓမ္မပြု ကျင့်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း၊ ယောက်ခမ တော်စပ်သူမှ သွားရောက်တောင်းပန်ပြောဆိုခဲ့သဖြင့် လွတ်မြောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း ကျူးလွန်ခံရသည့် အမျိုးသမီးက ပြောသည်။
ယင်းသို့ ပြုကျင့်ခဲ့သူတို့အား ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၇၆ မုဒိမ်းမှု၊ ကာမကို အတင်း အဓမ္မရယူမှု ပုဒ်မ ၃၆၆၊ မုဒိမ်းကျင့်ကြံရန် ကြိုးပမ်းမှု ပုဒ်မ ၁၁၄ တို့ဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင် ၁၀ ရက်နေ့က စစ်တွေမြို့မရဲစခန်းမှာ ကျူးလွန်ခံရသူအမျိုးသမီးက တရားလို လုပ်ပြီး အမှုဖွင့်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ တိုင်ကြားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ တပ်မတော်အနေဖြင့် ဖြစ်စဉ်မှန်ပေါ်ပေါက် စေရေး အတွက် စစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် စစ်ဆင်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည့် နယ်မြေဖြစ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးရမည့် သံသယ ရှိသူများအနေဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲသည့်နေရာဒေသတွင် ရောက်ရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် အချိန်အနည်း ငယ် ကြန့်ကြာပြီးမှသာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိသည်။
သို့သော်လည်း နှစ်ဖက်သက်သေထွက်ဆိုချက်များမှာ ကွဲလွဲမှုများရှိနေသဖြင့် စက်တင်ဘာလဆန်း၌ ပိုမိုတိကျသည့် စစ်ဆေးချက်များနှင့် ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံစစ်ဆေးမှသာ အဆိုပါပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ၃ ဦးမှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း ဝန်ခံ ထွက်ဆိုဖြောင့်ချက်ပေးခဲ့ကြောင်း တပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားသည်။ နစ်နာသူအမျိုးသမီးအား အကူအညီပေးနေ သူများက ယင်းအမှုကိုပွင့်လင်းမြင်သာပြီး လွတ်လပ်စွာ တရားစီရင်ရေးရှိစေရန်အတွက် အရပ်ဘက်တရားရုံးတွင် စစ်ဆေးပေးရန် လိုလားနေကြသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-75588
မှတ်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာသတင်းမီဒီယာအသီးသီးမှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၁။ ကခငျြတှငျ ပွောငျးရှတေ့ပျရငျးမြားကွောငျ့ ရှေးကောကျပှဲရလဒျထိခိုကျမညျကို စိုးရိမျ
၂။ အောကျခွထေိတှမှေု့မြား ရှောငျရှားနိုငျရေး ကရငျလကျနကျကိုငျအဖှဲ့မြားတှဆေုံ့ညှိနှိုငျးခဲ့
၃။ ညမထှကျရအမိနျ့နှငျ့ ကိုဗဈကနျ့သတျခကျြမြားခြိုးဖောကျသညျ့ ပလကျဝဒသေခံအခြို့ကို အရေးယူမညျ
၄။ ရှေးကောကျပှဲ နီးလာသဖွငျ့ တိုကျပှဲဖွဈလာမညျကို စိုးရိမျနေ
၅။ ဘတျဂကျြနှဈကုနျခါနီးအထိ တိုငျးရငျးသားစာပအေဖှဲ့တှေ ဘတျဂကျြမခပြေးနိုငျသေးလို့ အခကျတှေ့
၆။ ရှငျးရှငျးလငျးလငျးဖွဈရနျ နုတျထှကျပွီးမှ ရှေးကောကျပှဲဝငျခွငျးဖွဈဟု အမြိုးသမီးအုပျခြုပျရေးမှူးပွော
၇။ ရသတေ့ောငျတှငျ လကျနကျကွီးကြ ၁ ဦးသေ ၂ ဦးဒဏျရာရ
၈။ သီပေါ – နမျ့လနျ လမျးဘေးတှငျအမြိုးသားတဦး အလောငျးတှေ့
၉။ ကော့ကရိတျခရိုငျရှိ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျနယျမွမြေား၌ ရှေးကောကျပှဲ မကငျြးပနိုငျသေး
၁၀။ ခငျြးပွညျနယျ ကြီခါးမွို့တှငျ ဇိုမီးဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီ မဲဆှယျစညျးရုံးရေး ပွုလုပျ
၁၁။ RCSS/SSA ထိနျးခြုပျနယျမွအေတှငျး ကိုဗဈ-၁၉ စဈဆေးရေးဂိတျ ပွနျထောငျ
၁၂။ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ပလကျဝမွို့နယျမှ ကြေးရှာ(၉) အုပျစု ပါဝငျနိုငျမညျမဟုတျဟုဆို
၁၃။ လှတျတျောသညျ အစိုးရကို ထိနျးကြောငျးမှုအားနညျးဟု အမတျလောငျးထောကျပွ
၁၄။ ထိုငျးနယျစပျ ရှမျးဒုက်ခသညျမြား မဲပေးခှငျ့ရအုံးမညျမဟုတျ
၁၅။ Covid-19 ကွောငျ့ ကြောကျမကျြရတနာမြား ထကျဝကျဈေးဖွငျ့ ရောငျးခနြရေ
၁၆။ ဖာလာသီးပျေါခြိနျ ဈေးကသြညျ့အတှကျ စိုကျတောငျသူမြားအခကျအခဲဖွဈ
၁၇။ ဖားကနျ့တှငျ Covid-19 အတညျပွုလူနာ ၄ ဦး ထပျတိုး
၁၈။ ရခိုငျပွညျနယျရှိ quarantine စငျတာမြားအတှကျ နစေ့ဉျ စားနပျရိက်ခာကို WFP က ထောကျပံ့မညျ၁၉။ ကိုဗဈ-၁၉ ကနျြးမာရေးစဈဆေးနေ စဉျ မူးယဈဆေးမိ
၂၀။ COVID-19 ဆိုငျရာ လမျးညှနျခကျြမြားနှငျ့အညီ KNC ပါတီက မဲဆှယျစညျးရုံးမှုမြား ပွုလုပျနပွေီး နိုဝငျဘာ ၈ ရကျတှငျ ရှေးကောကျပှဲ မဖွဈနိုငျဟု KNC ပါတီ ဥက်ကဋ်ဌ ပွောကွား
၂၁။ တရားမြှတတဲ့ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပနိုငျမယျ့အခြိနျ မဟုတျကွောငျး ANP ပါတီ ထုတျပွနျ
၂၂။ ဆီဆိုငျ တှငျ ၁၃နှဈ အရှယျ ကလေးတဦးထံ ကိုဗဈ-၁၉ တှေ့
၂၃။ ကိုဗဈဒုတိယလှိုငျးကွောငျ့ အတိုကျခံပါတီမြား မဲဆှယျရာတှငျ အခကျကွုံနရေ
၂၄။ မှနျပွညျနယျ သဈတောဝနျထမျး ၈ ဦး ကိုဗဈ-၁၉ ကူးစကျခံရ
၂၅။ ဦးဂါကြေးရှာမှ မုဒိမျးမှုကိစ်စ တပျမတျောသားသုံးဦးနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားကို စဈစညျးကမျးအရ အရေးယူမညျ
ကခငျြပွညျနယျ ဆှမျပရာဘှမျမွို့နယျတှငျ မဲပေးပိုငျခှငျ့ရှိသူ ၁,၈၆၂ ဦးအနကျ ဩဂုတျလဆနျးပိုငျးက ပွောငျးရှလေ့ာသူ တပျမတျောသား ၄၀၀ ကြျောပါဝငျနကွေောငျး ရှေးကောကျပှဲကိုယျစားလှယျလောငျးမြားထံမှ (စကျတငျဘာ ၁၇) တှငျ သိရှိရ သညျ။ ရှေးကောကျပှဲဥပဒအေရ ဒသေတဈခုတှငျ ရကျပေါငျး ၉၀ နှငျ့အထကျ ရောကျရှိနထေိုငျပွီးမှသာ ထိုဒသေ၌ မဲစာရငျး တငျသှငျးနိုငျမညျဖွဈသျောလညျး မဲဆန်ဒ ရှငျစာရငျးတှငျ ရုတျတရကျရှပွေ့ောငျးလာသော တပျမတျောသားမြား ပါဝငျနခွေငျး အပျေါ ရှေးကောကျပှဲကိုယျစားလှယျလောငျးမြားက စိုးရိမျမှုရှိနပွေီး ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျထံ မေးမွနျးထားသညျ။
“အခု ကြှနျတေျာ့မဲဆန်ဒနယျမှာ စဈသားတှေ မဲပေးဖို့ စောငျ့နကွေတယျ။ သူတို့က အဆငျသငျ့ဖွဈနပွေီ။ ၂၀၁၅ တုနျးက လညျး ဒီလိုမြိုးစောငျ့နတေဲ့ပုံစံမြိုး မရှိခဲ့ဘူး။ သူတို့ထညျ့မယျ့ဘကျက မဲနိုငျသှားဖို့တော့ ရှိတယျ။ စဈတပျမဲနဲ့ပဲ အရေးနိမျ့ လာမလား စိုးရိမျတာပေါ့နျော” ဟု ကခငျြပွညျနယျပွညျသူ့ပါတီ (KSPP) မှ ဦးကှမျဂေါငျအောငျခမျးက ပွောသညျ။ လာမညျ့ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ဦးကှမျဂေါငျအောငျခမျးသညျ ဆှမျပရာဘှမျမွို့နယျမှ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျ နရောအတှကျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျဖွဈသညျ။
ရကျပေါငျး ၉၀ နထေိုငျခွငျးမရှိဘဲ မဲစာရငျး၌ တပျမတျောသားမြားပါဝငျနခွေငျးနှငျ့ ပတျသကျ၍ မွို့နယျရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျထံ မေးမွနျးထားဆဲဖွဈကွောငျး ဆှမျပရာဘှမျမွို့နယျမှ NLD ပါတီဝငျ လကျရှိ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒျေါဂထြေုရျောက ပွောသညျ။ ဆှမျပရာဘှမျမွို့နယျအခွခြေ တပျမတျောစခနျးမြားမရှိသျောလညျး ရှတေ့နျးရောကျ တပျရငျး တပျဖှဲ့မြားမှ တပျမတျောသားမြားက ရှေးကောကျပှဲအတှကျ ပုံစံ ၃ ဖွငျ့ လြှောကျထားလာသောကွောငျ့ လကျခံထားခွငျးဖွဈ သညျဟု မွို့နယျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲ အတှငျးရေးမှူး ဦးအောငျနိုငျဦးက ပွောသညျ။ လုံခွုံရေးနှငျ့သကျဆိုငျ သောကွောငျ့ တပျမတျောသားမြား၏ မဲစာရငျးအတိအကကြို ပေး၍ မရသေးကွောငျး၊ သို့သျော ပုံစံ ၃ဖွငျ့ လြှောကျထား လာသော တပျမတျောသား ၄၀၀ ၏ အခကျြအလကျမြားကို စကျတငျဘာ ၁၇ ရကျတှငျ စတငျစိစဈမညျဖွဈပွီး အခကျြ အလကျပွညျ့စုံပါက လကျခံမညျဖွဈကွောငျး ဦးအောငျနိုငျဦးက ပွောသညျ။
ကခငျြပွညျနယျအတှငျး မကွာခငျက ရှပွေ့ောငျးလာသညျ့ တပျမတျောသားမြား၏ မဲစာရငျးနှငျ့ ပတျသကျ၍ တပျမတျော သတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျမှူးခြုပျဇျောမငျးထှနျးကို ဆကျသှယျမေးမွနျးခဲ့သျောလညျး လကျခံ ဖွကွေားခွငျး မရှိပေ။ https://www.myanmar-now.org/mm/news/4518
ကရငျ့လကျနကျကိုငျအခငျြးခငျြးကွား အောကျခွေ မွပွေငျထိတှမှေု့မြား ရှောငျရှားနိုငျရေးအတှကျ ကရငျအမြိုး သားအစညျး အရုံး-KNU ဦးဆောငျပွီး ကရငျလကျနကျကိုငျအဖှဲ့ ၂ ဖှဲ့နှငျ့ တှဆေုံ့ ညှိနှိုငျးမှုတဈခုကို စကျတငျဘာလ ၁၄ ရကျနကေ့ KNU ထိနျးခြုပျနယျမွတေဈနရော၌ ပွုလုပျခဲ့သညျ။ KNU ၏ လကျနကျကိုငျတပျဖွဈသညျ့ ကရငျအမြိုးသားလှတျမွောကျရေး တပျမတျော (KNLA) အပါအဝငျ ကရငျ နယျခွားစောငျ့တပျ (BGF)၊ ငွိမျးခမျြးရေးကောငျစီ KNU/KNLA –PC) မှ ထိပျပိုငျး ခေါငျးဆောငျမြားပါဝငျ၍ မကွာသေးမီက ဖွဈပှားခဲ့သညျ့ အောကျခွထေိတှမှေု့မြားအပျေါ ဆှေးနှေးပွီး ရှဆေ့ကျထိတှမှေု့ မြား မဖွဈပျေါစရေေး နှငျ့ စညျးလုံးညီညှတျမှု ရရှိရေးတို့အပျေါ ဆှေးနှေးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
KNU အတှငျးရေးမှူး (၂) ပဒိုစောလှထှနျးက “ကရငျလကျနကျကိုငျ တပျဖှဲ့တှေ ဒီမွပွေငျဂရောငျးမှာ တဈဖှဲ့နဲ့တဈဖှဲ့ ထိတှေ့ မှုတှေ မဖွဈအောငျ နားလညျမှုတှမေလှဲအောငျအဲ့ဒီအတှကျ တှကွေ့တယျ။ နောကျတဈခုက တလောက ဖွဈသှားတဲ့ လမျးဟောငျးဘကျမှာ ပဈခတျမှုတှဖွေဈတော့ ကိုယျ့ကရငျပွညျသူတှကွေားမှာ အသံမြိုးမြိုးတှေ ထှကျလာတဲ့အပျေါမှာ အဲ့ဒါကို ရှငျးရှငျးလငျးလငျးဖွဈအောငျပေါ့၊ နားလညျမှု ပိုမိုရရှိဖို့ လိုအပျတာ ပေါ့”ဟု ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
အဆိုပါ တှဆေုံ့မှုတှငျ KNLA ဘကျမှ စဈဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျကွီး စောဂြျောနီနှငျ့ ဒုစဈဦးစီးခြုပျ ဒုဗိုလျခြုပျကွီး စောဘောကြျောဟဲ အပါအဝငျ KNU ကာကှယျရေးနှငျ့ အခွားထိပျပိုငျးခေါငျးဆောငျမြား၊ BGF မှ ကရငျပွညျနယျ နယျခွား စောငျ့တပျ အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ဗိုလျမှူးကွီး စောခဈြသူ၊ KNU/KNLA-PC မှ ဗိုလျမှူးကွီး စောနစေိုးမွ နှငျ့ ဘာသာရေး ခေါငျးဆောငျအခြို့တို့ ပါဝငျတကျရောကျခဲ့ကွသညျ။ ကနျြရှိသညျ့ ကရငျလကျနကျကိုငျအဖှဲ့တဈဖှဲ့ဖွဈသညျ့ ဒီမိုကရစေီ အကြိုးပွုကရငျတပျမတျော(DKBA) မှာ Covid-19 ကာလ သှားလာရေး အခကျအခဲကွောငျ့ တကျရောကျနိုငျခွငျးမရှိကွောငျး သိရသညျ။ http://kicnews.org/2020/09/%e1%80%b1%e1%80%a1%e1% 80%ac%e1%80%80%e1%80%
ပလကျဝစဈရှောငျမြားမှာ စားဝတျနရေေးကပျြတညျးသဖွငျ့ ကပျရောဂါကို မကွောကျနိုငျတော့ဘဲ နစေ့ဉျအသုံးစားရိတျရရနျ အသှားအလာကနျ့သတျထားသညျ့ ကြောကျတျောမွို့သို့ အထမျးလိုကျသှားခွငျးဖွဈသညျဟု စဈရှောငျမြား ကူညီသူတဈဦးက ပွောသညျ။ ကိုဗဈနိုငျတငျးကနျ့သတျမှုမြား ခထြားသညျ့ဒသေသို့ နယျမွကြေျောလှနျ သှားလာခဲ့သညျ့ ပလကျဝနေ အရပျသား ၄၁ ဦးကို အရေးယူရနျ ပွငျဆငျနသေညျဟု ခငျြးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ဝငျတဈဦးက ပွောသညျ။ ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမွို့နှငျ့ မိုငျ ၃၀ ကြျောဝေးသော ရခိုငျပွညျနယျ ကြောကျတျောမွို့တှငျ အရကျဆီပုံးမြား သှားရောကျသယျဆောငျ၍ ပွနျလာသညျ့ စဈရှောငျနှငျ့ အရပျသား ၄၁ ဦးကို ပလကျဝမွို့အခွစေိုကျ တပျမတျောခွလေငျြ တပျရငျ ၂၈၉ က စကျတငျဘာ ၉ ည ၈ နာရီခနျ့တှငျ ဖမျးဆီးခဲ့သညျ။
ကပျရောဂါစညျးကမျးခကျြမြားနှငျ့ ညမထှကျရအမိနျ့ကို ခြိုးဖောကျခဲ့သညျ့အတှကျ တပျမတျောက ဖမျးဆီးခဲ့ကာ နှဈရကျခနျ့ စဈဆေးမေးမွနျးပွီးနောကျ ပလကျဝမွို့နယျအာဏာပိုငျအဖှဲ့သို့ လှဲပွောငျးပေးခဲ့သညျဟု ခငျြးပွညျနယျ စညျပငျသာယာရေး ဝနျကွီး ဦးစိုးထကျက ပွောသညျ။ “သတျမှတျထားတဲ့အခြိနျကို ကြျောလှနျပွီး ပုဒျမ ၁၄၄ ကို ဖောကျဖကျြတာ၊ နောကျ ကိုဗဈ နဲ့ဆိုငျတဲ့ ဘေးအန်တရာယျဆိုငျရာပုဒျမနဲ့လညျး ငွိတာပေါ့။ ပုဒျမနှဈခုလောကျနဲ့ ငွိတဲ့သဘောဖွဈတာပေါ့” ဟု ဦးစိုးထကျက ပွောသညျ။
“သူတို့သှားတာကလညျး အပွဈတော့မရှိပါဘူး။ စားစရာမှမရှိတာကိုး။ ကိုဗဈကိုလညျး ကွောကျမနအေားတော့ဘဲ သှားတော့ အခုလိုတှေ ဖွဈကုနျတာပေါ့”ဟု မိုငျနနျးဝကေ ပွောသညျ။ သဘာဝဘေးအန်တရာယျ စီမံခနျ့ခှဲ မှုဥပဒတှေငျ မတူသော ပွဈမှုမြားအတှကျ အနိမျ့ဆုံးပွဈဒဏျ ထောငျဒဏျ တဈလမှ အမွငျ့ဆုံး ထောငျဒဏျ ၃ နှဈအထိ ခမြှတျနိုငျသလို ပုဒျမ ၁၄၄ ညမထှကျရအမိနျ့ကို ခြိုးဖောကျပါက ပွဈမှုဆိုငျရာ ပုဒျမ ၁၈၈ ဖွငျ့ ထောငျဒဏျ ၃ လအထိ အရေး ယူနိုငျသညျ။ https://www.myanmar-now.org/mm/news/4506
၂၀၂၀ ပါတီစုံ ဒီမိုကရစေီ ရှေးကောကျပှဲ နီးလာသဖွငျ့ သြှမျးပွညျပွနျလညျထူထောငျရေးကောငျစီ( RCSS/SSA ) နယျမွေ အတှငျး တိုကျပှဲ ဖွဈပှားလာမညျကို စိုးရိမျနကွေောငျး RCSS ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူက ပွောကွားသညျ။ လကျရှိမှာ RCSS/SSA ထိနျးခြုပျသညျ့ နယျမွတှေငျ တိုကျပှဲမြား မရှိသျောလညျး တပျမတျော စဈအငျအားလှုပျရှား/ဖွညျ့တငျးနမှေုကွောငျ့ တိုကျပှဲ ပွနျဖွဈလာမညျကို စိုးရိမျနသေညျဟု RCSS/SSA မှ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဒုဗိုလျမှူးကွီး အုမျခေး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကိုပွောသညျ။
ရှေးကောကျပှဲကငျြးပမညျ့ ရကျနီးလာသညျ့နှငျ့ အမြှ တဖကျသတျတိုကျပှဲ ပုံစံ ပွုလုပျပွီး ပွညျသူမြားကို ထိတျလနျ့အောငျ လုပျလာနိုငျပွီး၊ ပွညျသူမြား ဆန်ဒမဲ ထညျ့မညျ့နရော လှတျလှတျလပျလပျ မသှားရဲပဲဖွဈမညျကို စိုးရိမျကွောငျး ဒုဗိုလျမှူးကွီး အုမျခေး က ပွောသညျ။ သြှမျးပွညျ တဝှမျးတှငျ ရှေးကောကျပှဲနီးလာသညျ့နှငျ့ အမြှ တိုကျပှဲမြားဆကျလကျဖွဈလာမညျကို တိုငျးရငျးသားလကျနကျ ကိုငျမြား၊ နိုငျငံရေးပါတီမြား နှငျ့ ပွညျသူမြားက စိုးရိမျနကွေသညျ။ ယခုလ ၁၁ ရကျမှ စတငျကာ သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး မူဆယျခရိုငျ မုံးပျေါဒသေတှငျ ကခငျြလှတျမွောကျရေး တပျမတျော( KIA) နှငျ့ အစိုးရတပျမတျောတို့ တိုကျပှဲဖွဈပှားကာ လကျရှိ အခြိနျထိ စဈရေးတငျးမာနကွေောငျးသိရသညျ။
“ရှေးကောကျပှဲနီးလာရငျတော့ ကမြတို့ဖကျက တိုကျပှဲဖွဈမှာကိုကွောကျရသလို၊ အခုက ကိုဗဈကိုလညျးကွောကျနရေ တယျ။ ရှေးကောကျပှဲတိုငျးမှာ ဖွဈနကွေဆိုတော့ စိုးရိမျနရေတာပေါ” ဟု သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး မုံးပျေါဒသေခံ အမြိုးသမီး တဦးက ပွောသညျ။ လာမညျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ RCSS/SSA ထိနျးခြုပျရာ နယျမွအေတှငျး နိုငျငံရေး ပါတီမြား မဲဆှယျစညျးရုံးရနျအတှကျ ကွိုတငျ အသိပေးအကွောငျးကွားရမညျဖွဈကွောငျး စကျတငျဘာ (၁) ရကျနကေ့ ကွငွောခကျြ တစောငျထုတျပွနျထားသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/18493
တိုငျးရငျးသားစာပအေဖှဲ့တှကေို ဘတျဂကျြနှဈကုနျတော့မယျ ပွညျနယျအစိုးရကနေ ငှမေခပြေးသေးတဲ့အတှကျ အခကျ အခဲတှနေ့ကွေရတယျလို့ စာပနှေငျ့ယာဉျကြေးမှုအဖှဲ့တှဆေီကနကွေားသိရပါတယျ။ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျ(ဈ)ကွောငျ့ လူစုလူဝေး တှဖွေဈစတေဲ့လုပျငနျးတှဖွေဈတဲ့ တိုငျးရငျးသားရိုးရာပှဲတျောတှေ၊ အမြိုးသားနတှေ့ေ၊ စာပမှေမျးမံသငျတနျးတှေ စတဲ့ လုပျငနျးတှကေိုတော့ လုပျခှငျ့မရတော့တဲ့အတှကျအသုံးပွုဖို့ လြာထားတဲ့ ဘတျဂကျြကိုတော့ မခပြေးနိုငျတော့ တာဖွဈပါ တယျ။
တိုငျးရငျးသားစာပစောအုပျထုတျလုပျတာတှေ၊ ကြောငျးစာအုပျထုတျဖို့လုပျငနျးတှေ တခြို့လုပျငနျးတှကေို ခေါငျးစဉျပွောငျး အသုံးပွုဖို့ တိုငျးရငျးသားအဖှဲ့ ၆ ဖှဲ့က စီစဉျထားပမေယျ့လညျး စကျတငျဘာလ ၁၅ ရကျနအေ့ထိ မရသေးဘူးလို့ ကယားပွညျနယျ ကယနျးစာပနှေငျ့ယဉျကြေးမှုကျောမတီအတှငျးရေးမှူး ဦးခှနျးထကျက ပွောပါတယျ။
“ကိုဗဈကာလမို့ လုံးဝမရခဲ့ပါဘူး ကနြောတို့ ကယနျးအမြိုးသားနဆေို့လညျး ခပြေးပါတယျ ကနြောတို့ပှဲလုပျလို့မရပါဘူး ကယနျးစာပေ သငျတနျးဖှငျ့ဖို့အတှကျလုပျထားပါတယျ လူစုလူဝေးမလုပျရတဲ့အတှကျ ကနြောတို့မလုပျခဲ့ပါဘူး ကယနျးစာပသေငျတဲ့ ဆရာဘဆရာမတှကေို မှမျးမံသငျတနျးလုပျဖို့ လြာထားတာ ခပြေးပါတယျ ဒါပမေယျ့ ကနြောတို့ ဘာမှလုပျလို့ မရဘူးဖွဈ နပေါတယျ။ ပွနျပေးမယျ့အပိုငျးက ကိုယျကိုယျတိုငျစိုကျထားတာပွနျပေးပါတယျ နောကျတခါ လူစုလူဝေးမဟုတျတဲ့ကိစ်စ တှပွေနျပေးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့စကျပိုငျးဆိုငျရာ level 1စာအုပျထုတျဖို့ ခွောကျဖှဲ့လြာထားပါတယျ အဲ့ဒီစာအုပျထုတျဖို့ အတှကျ ပစ်စညျးဝယျဖို့အတှကျ ကတော့ဝယျလို့မရဘူး ခေါငျးစဉျပွောငျးပွီးတငျထားတာ လုံးဝမပေးပါဘူး။” လို့ ဦးခှနျးထကျ က ပွောပါတယျ။
၂၀၁၉-၂၀၂၀ အတှကျ ဘတျဂကျြကိုတော့ ၃လစာသာ ကွိုတငျထုတျပေးခဲ့ပွီး ၂၀၂၀ ဧပွီလမှ စကျတငျဘာလ အထိ ခွောကျလစာကို ကွိုတငျမထုတျပေးတဲ့အတှကျ အရငျးနှီးရှိတဲ့လုပျငနျးရှငျတှဆေီ အတိုးမဲ့ခြေးယူထား တာဖွဈပါတယျ။ ကယားပွညျနယျတှငျ တိုငျးရငျးသားစာပနှေငျ့ယဉျကြေးမှုကျောမတီတှေ ခှဲဝသေုံးစှဲခှငျ့ဘတျဂကျြငှတှေကေို နောကျကထြုတျ ပေးတဲ့အတှကျ ကျောမတီလုပျငနျးတှကေို တခွားငှခြေေးပွီးလုပျငနျးတှဆေောငျရှကျခဲ့ကွရလို့ အခကျအခဲတှကွေုံတှေ့ ခဲ့ကွ ရပါတယျ။ ကယောတိုငျးရငျးသားစာပနေဲ့ ယဉျကြေးမှုအနနေဲ့ဆိုရငျ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ်ဍာနှဈအတှကျ သိနျး၃၀၀ သုံးစှဲ ခှငျ့ ပွုထားပမေယျ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ လူစုလူဝေးဖွဈစမေယျ့ကိစ်စတှကေို ခှငျ့မပွုတော့ဘဲ ရိုးရာပစ်စညျးဝယျယူဖို့ အတှကျ သာ ငှကွေေးသုံးစှဲခှငျ့ပွုထားပါတယျ။ တိုငျးရငျးသားစာပေ အဖှဲ့ ၁၀ ဖှဲ့ကနေ ထပျမံထုတျယူဖို့ ကပျြ တဈရာလေးဆယျ သုံးသနျးကြျောကို ထုတျယူဖို့ကနျြရှိနသေေးတာဖွဈပါတယျ။
အခုလို ဘဏ်ဍာနှဈအတှငျး လုပျငနျးအကောငျအထညျအဖျောဖို့ ဘတျဂကျြအခြိနျမှီမခပြေးရခွငျးမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျ(ဈ) ကပျရောဂါကွောငျ့ လုပျဆောငျမညျ့ အခနျးအနားတှေ ၊ နထေူ့းနမွေ့တျအခနျးအနားတှကေို မပေးတော့တာပဲ တခွား စာပေ လုပျငနျးတှမှော လိုအပျတာတှသေုံးဖို့ ဘတျဂကျြကို ပွောငျးသုံးဖို့ ခပြေးသှားမှာဖွဈတယျလို့ ဗမာတိုငျးရငျးသား ရေးရာ ဝနျကွီး ဦးလှမြိုးဆှကေ ပွောပါတယျ။ ယခု အသုံးပွုဖို့ ကနျြတဲ့လုပျငနျးတှကေိုတော့ လာမညျ့ဘတျဂကျြနှဈမှာ ဆကျလကျ ဆောငျရှကျနိုငျဖို့ စီစဉျပေးသှားမှာပါလို့လညျး ဝနျကွီးက ပွောပါတယျ။ တိုငျးရငျးသားစာပနှေငျ့ယဉျကြေးမှု အသုံးစရိတျ အတှကျ ဘတျဂကျြကို ကယားပွညျနယျတဈခုတညျးသာ ရရှိတာဖွဈပါတယျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-
ကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူးဘဝမှ နိုငျငံရေးသမားအဖွဈရှေးကောကျပှဲ ဝငျပွိုငျရာတှငျ ရှငျးရှငျးလငျးလငျးဖွဈရနျအတှကျ အုပျခြုပျ ရေးမှူးအဖွဈမှ နုတျထှကျထားပွီးဖွဈသညျဟု ဖားအံမွို့နယျ၊ ကော့ထျောကြေးရှာအုပျစု (တောငျကလေး) အမြိုးသမီး အုပျခြုပျရေးမှူး နနျးခငျမသကျမာဝငျးက ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။ “ကမြတို့ကတော့ ကငျးရှငျးတယျ။ သူတို့ကကတြော့ (ပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ဝငျတှေ) ပါတီအရောငျပွပွီးတော့မှ နိုငျငံတျောရဲ့ ဘတျဂကျြနဲ့ သှားတာတှေ၊ ပေးတာတှေ သူတို့ကို ပိုအကောငျးမွငျအောငျ လုပျဆောငျနကွေတာ တှရေ့တယျ။ ပါတီနိုငျငံရေး ကငျးရှငျးရမယျဆိုတာ အုပျခြုပျရေး အခငျြးခငျြး တူတာတောငျမှ သူတို့နဲ့ ကမြတို့ မတူတာ တှရေ့တယျ”ဟု နနျးခငျသကျမာဝငျးက ပွောသညျ။
တောငျကလေး အုပျခြုပျရေးမှူးဟု လူသိမြားသညျ့ နနျးခငျသကျမာဝငျးသညျ အဆိုပါတာဝနျကို ၂၀၁၃ ခုနှဈမှ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲ ကရငျပွညျနယျ အမှတျ ၇ (ဖားအံ -၂) တသီးပုဂ်ဂလကိုယျစားလှယျ လောငျးအဖွဈ အမညျစာရငျး မတငျသှငျးမီ အခြိနျထိ ၈ နှဈကွာ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့သူ ဖွဈသညျ။ ထိုသို့ တာဝနျထမျးဆောငျစဉျ ကာလအတှငျး ဖားအံမွို့နယျ၊ အုပျခြုပျရေးမှူးက ဆငျ့ချေါကာ ကြေးရှာ အုပျခြုပျရေး မှူးမြားသညျ ပါတီနိုငျငံရေးကငျးရှငျးရမညျဆိုသညျ့ ခံဝနျကတိကို ၂ ကွိမျ တိုငျလကျမှတျထိုး ပေးခဲ့ရဖူးသညျဟု သူမက ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။ ထို့အတှကျ ရှေးကောကျပှဲဝငျရနျ ဆုံးဖွတျ လိုကျသညျ့အခါ ကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူးအဖွဈမှ နုတျထှကျပွီး ခရိုငျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျထံ အမညျစာရငျးတငျသှငျးခဲ့ ကွောငျး၊ အမညျစာရငျးတငျသှငျးရာတှငျ ခရိုငျကျောမရှငျက အုပျခြုပျရေးယန်တရားကလူမြားလညျးနုတျမထှကျဘဲ ရှေးကောကျ ပှဲ ဝငျနိုငျသညျဟု ညှနျကွားစာရှိ ထားကွောငျး ရှငျးပွခဲ့သညျဟု ဆိုသညျ။
တောငျကလေး အမြိုးသမီးအုပျခြုပျရေးမှူးဟောငျး နနျးခငျသကျမာဝငျး ဝငျပွိုငျမညျ့ ပွညျနယျ အမြိုးသားလှတျတျော အမှတျ ၇ တှငျ သူမနှငျ့အတူ ပါတီအသီးသီးမှကိုယျစားလှယျ ၇ ဦးဝငျပွိုငျသှားမညျဖွဈသညျ။ http://kicnews.org/2020/09/% e1%80%9b%e1%80%bd %e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျ ကူးစကျမှု မြားပွားနသေော ကာလ ရခိုငျပွညျနယျ ရသတေ့ောငျမွို့နယျ ရှလေောငျးတငျကြေးရှာအတှငျး စကျတငျဘာလ ၁၇ ရကျနေ့ နံနကျ ၁၀ နာရီ အခြိနျက လကျနကျကွီး ကရြောကျပေါကျကှဲသညျ့အတှကျ ရှာသား ၁ ဦး သဆေုံးပွီး ၂ ဦး ထိခိုကျဒဏျရာ ရရှိခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ အဆိုပါ သဆေုံးသူမှာ အသကျ ၄၅ နှဈအရှယျ ဦးမောငျမောငျခြေ ဖွဈပွီး ထိခိုကျဒဏျရာ ရရှိသူမြားမှာ အသကျ ၆၀ အရှယျ ဦးလှထှနျးမောငျနှငျ့ အသကျ ၇၀ အရှယျ ဒျေါလှစောနုတို့ ဖွဈကွောငျး ရှလေောငျးတငျကြေးရှာမှ အုပျခြုပျရေး အဖှဲ့ဝငျ တဦးက ပွောသညျ။
ရသတေ့ောငျမွို့နယျ ရှလေောငျးတငျကြေးရှာတှငျ အိမျခွေ ၃၀၀ ကြျော၊ လူဦးရေ ၁၀၀၀ ကြျောရှိပွီး ထိုသို့ လကျနကျကွီး ရှာထဲသို့ ကရြောကျ ပေါကျကှဲသညျ့အတှကျ လကျရှိအခြိနျတှငျ ရှာလုံးကြှတျ နီးပါး ထှကျပွေးနရေကွောငျး၊ ယနေ့ မနကျ ပိုငျးက ကြေးရှာအနီးတှငျ တိုကျပှဲ ဖွဈပှားခွငျး မရှိဘဲ ရသတေ့ောငျ တပျရငျး ၊ စဈတှေ ပါဒလိတျတပျရငျး၊ မယေုမွဈ အတှငျး လှညျ့လညျနသေော တပျမတျောစဈရယောဉျမြားမှ လကျနကျကွီးမြား ပဈခတျမှုမြားရှိခဲ့ပွီးနောကျ ကြေးရှာ အတှငျး သို့ လကျနကျကွီး ၂ လုံး ကရြောကျပေါကျကှဲခွငျး ဖွဈကွောငျး ပွောသညျ။ ရသတေ့ောငျမဲဆန်ဒနယျမှ အမြိုးသားလှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ဦးခငျမောငျလတျက “ရှာသားတှေ ပွောပွခကျြအရတော့ ရသတေ့ောငျ တပျရငျးဘကျက ပဈတာလို့ပွော တာရှိတယျ။ စဈတှေ ဘကျကနလေညျး လှမျးပဈတာရှိတယျ။ ရှာထဲကို ပထမဆုံးကတြဲ့ လကျနကျကွီးထိလို့ ရှာသား တယောကျဆုံးတယျ။ တိုကျပှဲဖွဈလို့ လှမျးပဈတာလညျး။ အပွနျအလှနျ ပဈခတျမှုဖွဈတာလား ဆိုတာတော့ ပဈခတျမှု အခွေ အနကေို တိတိကကြ မသိဘူး။ ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။ ဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျပွီး ရှာသားမြား၏ စှပျစှဲပွောဆိုခကျြမြား အပျေါ မေးမွနျးနိုငျရနျ ဧရာဝတီမှ တပျမတျောသတငျး ပွနျကွားရေးအဖှဲ့မှ ဗိုလျခြုပျဇျောမငျးထှနျးနှငျ့ ရခိုငျပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ဝငျ လုံခွုံရေးနှငျ့ နယျစပျရေးရာ ဝနျကွီး ဗိုလျမှူးကွီး မငျးသနျးအား ဆကျသှယျခဲ့သျောလညျး ဆကျသှယျ၍ မရှိခဲ့ ပေ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2 020/09/17/ 230042.html
၈။ သီပေါ-နမျ့လနျ လမျးဘေးတှငျအမြိုးသားတဦး အလောငျးတှေ့
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး သီပေါမွို့နယျ သီပေါ-နမျ့လနျ ကားလမျးဘေးတှငျ သနေတျဒဏျရာဖွငျ့ သဆေုံးနသေညျ့ အမြိုးသား တဦး အလောငျး တှရှေိ့ကွောငျး စုံစမျးသိရသညျ။
အဆိုပါ သီပေါမွို့နယျ နမျ့ပုံ့ပ ကြေးရှာအကြျော သီပေါ-နမျ့လနျ ကားလမျးဘေးတှငျ သနေတျဒဏျရာဖွငျ့ သဆေုံးသညျ့ အမြိုးသားကို မညျသညျ့ အဖှဲ့အစညျးမှ လာရောကျပဈခတျသှားသညျကို မသိရှိကွောငျး၊ လကျရှိမှာ သီပေါရငျခှဲရုံသို့ ပို့ဆောငျထားကွောငျး သီပေါမွို့ နယျစညျးမခွား ပရဟိတ မှ ကိုမြိုး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ကို ပွောသညျ။ “ ကနြျောတို့ အဖှဲ့ကို ရဲစခနျးက နလေ့ညျ ၁၁ နာရီခှဲလောကျမှာ ဖုနျးဆကျလာတယျ။ အဲ့ဒါနဲ့ ကနြျောတို့အလောငျးသှားသယျခဲ့တယျ။ သနေတျဒဏျရာက ၂ခကျြပါ။ လကျဖြံနဲ့ ရငျအုံမှာပါ”ဟု ကိုမြိုး ကပွောသညျ။ သနေတျဒဏျရာဖွငျ့ သဆေုံးသညျ့ အမြိုးသား ၏ နရေပျလိပျစာကို လကျရှိ အခြိနျထိ မသိရှိသေးပေ။
ထို သီပေါ-နမျ့လနျ ကားလမျးဘေးတှငျ တကွိမျတခါမှ ယခုကဲ့သို့ အမှုမဖွဈဖူးကွောငျးလညျး သီပေါဒသေခံမြားက ပွော သညျ။“ ဘာကွောငျ့ သနေတျပဈခံရတယျဆိုတာကိုတော့ သကျဆိုငျရာက စုံစမျးနဆေဲပါ။ အဲ့နရောကတော့ တခါမှ မဖွဈဖူး ဘူး”ဟု သီပေါဒသေခံ အမြိုးသားတဦးက ပွောသညျ။ သီပေါမွို့နယျ အတှငျး သွဂုတျ (၂၄)ရကျတှငျ အမြိုးသား ၃ ဦး သနေတျပဈသတျခံရပွီး၊ ဧပွီလတှငျလညျး မိသားစုဝငျ ၅ဦး ပဈသတျခံရပွီး ယနခြေိ့နျထိ အမှုမှနျ မပျေါသေးပေ။ https: //burmese.shannews.org/archives/18488
ကရငျပွညျနယျ၊ ကော့ကရိတျခရိုငျ၊ ကော့ကရိတျမွို့နယျနှငျ့ ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျအတှငျးရှိ တိုငျရငျးသား လကျနကျ ကိုငျမြား ထိနျးခြုပျသညျ့ နယျမွမြေားရှိ ကြေးရှာမြားတှငျ ရှေးကောကျပှဲ မကငျြးပနိုငျသေးကွောငျး ခရိုငျရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျဥက်ကဋ်ဌ ဦးဌေးအောငျက ကအေိုငျစီသို့ စကျတငျဘာ ၁၄ ရကျနတှေ့ငျ ပွောသညျ။ “၂၀၁၅ အတိုငျးပဲ၊ ကော့ရိတျ ကတော့ မထူးခွားဘူး။ ကော့ကရိတျမှာ မလုပျနိုငျတဲ့ ရှာကွီး ၇ ရှာရှိတယျ။ အံကောငျးတို့၊ အံဖကွီးတို့ မလုပျနိုငျဘူး” ဟု ခရိုငျကျောမရှငျ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးဌေးအောငျက ပွောသညျ။
လာမညျ့ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ကော့ကရိတျမွို့နယျအတှငျး မဲရုံ ၁၂၃ ရုံ ထားရှိသှားမညျဖွဈပွီး ကွာအငျး ဆိပျကွီးမွို့ နယျတှငျ မဲရုံ ၁၂၀ ထားရှိသှားရနျ စီစဉျထားသညျဟု ခရိုငျကျောမရှငျထံမှ သိရသညျ။ “ရှာမှာတော့ ဒီတခါမလုပျဖွဈဘူး။ ကျောမရှငျက သူတို့အုပျခြုပျရေးမှူး မထားနိုငျတော့ လုပျခှငျ့မပေးဘူးလေ” ဟု ကော့ကရိတျမွို့နယျ၊ ရှာတနျးရှညျကြေးရှာအုပျစု၊ အုပျခြုပျ ရေးမှူး(ကအေနျယူက ခနျ့အပျထားသူ) မနျးမွအေးက ပွောသညျ။ ယခုလို ကော့ကရိတျမွို့နယျအတှငျးရှိ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျနယျမွမြေားတှငျ ရှေးကောကျပှဲမလုပျနိုငျသျောလညျး ကွာအငျးဆိပျကွီး မွို့နယျအတှငျးရှိ ကြေးရှာအခြို့တှငျမူ မဲပေးနိုငျရေး စီစဉျထားသညျဟု ခရိုငျရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျထံမှ သိရသညျ။
ကရငျပွညျနယျ၊ ကော့ကရိတျခရိုငျအတှငျးရှိ ကော့ကရိတျမွို့နယျနှငျ့ ကွာအငျးဆိပျကွီး မွို့နယျမြားသညျ ကအေဲနျယူ-ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး၊ တပျမဟာ (၆)၊ ဒူးပလာယာခရိုငျအတှငျး ပါဝငျကာ ယခုလို ရှေးကောကျပှဲ မလုပျနိုငျသေး သျောလညျး ခရိုငျအတှငျးမဲဆှယျမညျ့ ပါတီမြားကိုမူ ကိုဗဈကာကှယျရေး ထုတျပွနျခကျြမြားနှငျ့အညီ မဲဆှယျရမညျဟု ဒူးပလာယာခရိုငျက စကျတငျဘာ ၇ ရကျနတှေ့ငျ ထုတျပွနျထားသညျ။ http://kicnews.org/2020/09/%e1%80%b 1 %e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%b7%e1%80%80%e1%
ခငျြးပွညျနယျ ကြီခါးမွို့တှငျ စကျတငျဘာ ၁၆ ရကျက ဇိုမီးဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ ZCD ပါတီအနဖွေငျ့ မဲဆှယျစညျးရုံးရေး ပွုလုပျခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
အဆိုပါ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးပွုလုပျမညျ့ ကြီခါးမွို့သို့ ဇိုမီးဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီ ဝငျလူငယျမြားက ဆိုငျကယျအစီးရေ ၅၀ ဖွငျ့ တှနျးဇံမွို့မှသှားရောကျပူးပေါငျးခဲ့ကွောငျး တီးတိနျမဲဆန်ဒနယျ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး ဦးပငျ့ကမျးလနျြ က ပွောကွားသညျ။“ဒီနကေ့ တှနျးဇံကနေ ကြီခါးအထိ ဆိုငျကယျနဲ့ သှားနကွေပွီ။ ဆိုငျကယျအစီး ၅၀ လောကျသှား ပါတယျ။ တှနျးဇံက သှားတာကတော့ လူငယျတှပေါပဲ။ ကိုယျစားလှယျတှကေတော့ ကြီခါးမှာစောငျ့နပေါတယျ။ ကြီးခါး ရောကျရငျ လူစုခှဲပွီးတော့ ရှာအလိုကျ စညျးရုံးရေးဆငျးမှာပါ” ဟု ဦးပငျ့ကမျးလနျြက ဆိုသညျ။
လကျရှိတှငျ ခငျြးပွညျနယျအတှငျး လမျးမြားမှာ မွပွေိုမှုဖွဈပှားနသေဖွငျ့ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးဆငျးမရသညျ့ ရှာမြားလညျးရှိ ကွောငျး ၎င်းငျးက ဆကျလကျပွောကွားသညျ။ “လောလောဆယျတော့ တခြို့ရှာတှသှေားတယျ။ ဒါပမေဲ့ လမျးတှေ မွပွေို တော့လညျး သှားလို့မရတာတှေ အမြားကွီးရှိတယျ။ တဈခြို့နရောတှကေ ကားသှားလို့ကိုမရတာ။ ဆိုငျကယျ လောကျပဲ သှားလို့ရတယျ။ ဒီလို အခကျအခဲတှတေော့ ရှိတယျ” ဟု ဦးပငျ့ကမျးလနျြက ပွောကွားသညျ။ https://news-eleven.com /article/192610
ကနမွေ့နျမာနိုငျငံတှငျ ကိုဗဈ-၁၉ ဓါတျခှဲအတညျပွုလူနာ နစေ့ဉျရာနှငျ့ခြီတိုးလာနသေညျဖွဈရာ လူထု ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ ကငျးဝေးစရေေးအတှကျရညျရှယျပွီး ရှမျးပွညျပွနျလညျထူထောငျရေးကောငျစီ ရှမျးပွညျတပျမတျောက ၎င်းငျးထိနျးခြုပျလှုပျရှား ရာနယျမွမြေားအတှငျး ဂိတျပွနျထောငျကာ အဝငျအထှကျသှားလာနသေူမြားအား စဈဆေးမှုပွုနကွေောငျးသိရသညျ။
စကျတငျဘာလဆနျးကတညျးကစပွီး RCSS/SSA ထိနျးခြုပျလှုပျရှားသညျ့ သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး ၊မွောကျပိုငျး၊အရှပေို့ငျး အတှငျး မွို့နယျမြားတှငျ ကိုဗဈ ၁၉ကာကှယျရေးအတှကျဒသေခံလူထုအား ကနျြးမာရေးစဈဆေးပေးမှုစခနျးမြား ပွနျလညျ ထားရှိလာခွငျးဖွဈကွောငျး RCSS/SSA ပွောခှငျ့ရ ဒု-ဗိုလျမှူးကွီး အုမျခေး က သြှမျးသံတျောဆငျ့အားပွောသညျ။ “ဒုတိယ လှိုငျးကွောငျ့ရောဂါကူးစကျမှု မရှိအောငျ မွို့အဝငျအထှကျတှမှောကနြျောတို့သှားပွီး ဂိတျထောငျစောငျ့စဈပေးတယျ။
အရငျ ကိုဗဈစစကူးတုနျးက လုပျသလိုပေါ့။ ရောဂါကွောငျ့ အခကျအခဲတော့ ရှိကွမှာဘဲနော့။ ဒါမယျ့ကနြျောတို့ ထိခိုကျ နဈနာ အောငျတော့မလုပျဘူး။ မွို့တိုငျးကိုဗဈကငျးစငျဖို့အတှကျပါ။ ” ထိုသို့ RCSS/SSA မှ စဈဆေးမှုသညျ သှားလာ နသေော ဒသေခံလူထုအတှကျ နှောငျ့နှေးကွနျ့ကွာစသေဖွငျ့ လြှော့ပေါ့ ပေးရနျ တအာငျးအမြိုးသားပါတီ TNP က တောငျးဆိုလိုကျသညျ။ TNP ပါတီဉက်ကဌမိုငျးနုမျဟနျ က- “ကနြျောတို့မိုငျးကိုငျမွို့ ရဲ့တောငျပျေါဒသေဘကျမှာ နထေိုငျတဲ့ ဒသေခံလူထု သှားရေးလာရေးအတှကျအခကျအခဲဖွဈစတေယျ။ မွို့ဈေးဆငျးပွီး လှူဖို့ဒါနျးဖို့ စားသောကျဖို့အတှကျ ဝယျစရာ ခွမျးဖို့တောငျမှ ခှငျ့မပွုတော့ အခကျအခဲဖွဈတာပေါ့။ တခြို့လညျး ဆှမြေိုးမိဘ ဆုံးတာတောငျ မသှားနိုငျဘူး။ အရငျက လညျးဒါမြိုးလုပျခဲ့ဖူးတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီလောကျအထိ မကွပျဘူး။ ခုလညျး ရှေးကောကျပှဲအတှကျစညျးရုံးရေးဆငျးခြိနျဖွဈ နတေော့ စဈဆေးတငျးကွပျမှုနဲနဲလြှော့ပေါ့ပေးဖို့တောငျးဆိုခငျြပါတယျ”- ဟု ပွောဆိုသညျ။ https://burm ese.shannew s.org/arch ives/18485
ခငျြးပွညျနယျတှငျလူဦးရအေမြားဆုံးဒသေဖွဈသညျ့ ပလကျဝမွို့နယျတှငျ လာမညျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ကြေးရှာအုပျစု ပေါငျး (၉) အုပျစုမှ ဒသေခံမြား ပါဝငျနိုငျခွငျး ရှိမညျမဟုတျဟု ပလကျဝမွို့နယျပွညျနယျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ နရောတှငျဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ ခငျြးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့စညျပငျဝနျကွီးဦးစိုးထကျထံမှ သိရသညျ။ စညျပငျဝနျကွီး ဦးစိုးထကျက “ရနျသူစိုးမိုးမှုရှိတဲ့ ရှာတှကေိုတော့ သှားလို့မရနိုငျဘူး။ လောလောဆယျ ပလကျဝမွို့နယျမှာရှိတဲ့ ကြေးရှာ ၉ အုပျစု လောကျက ရှေးကောကျပှဲမှာ မပါဝငျနိုငျလောကျဘူးလို့ မှနျးထားတယျ” ဟုပွောသညျ။
လကျရှိနယျ မွအေခွအေနအေရ ပလကျဝမွို့နယျတှငျရှိသော ကြေးရှာ ကိုးအုပျစုတှငျ လကျနကျကိုငျ အဖှဲ့အစညျးမြား အဝငျအထှကျ ရှိသညျဟု သတငျးရရှိသျောလညျး ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပနိုငျခွငျး ရှိ/မရှိကို ဆုံးဖွတျ၍ မရသေးကွောငျး ခငျြးပွညျနယျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ အရာရှိ ဦးလငျးကြျောက ပွောသညျ။ ပွညျနယျ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ အရာရှိ ဦးလငျးကြျောက “မကငျြးပနိုငျခဲ့ဘူးဆိုရငျလညျး ကနျြတဲ့အုပျစုက ကငျြးပနိုငျရငျ ကနျြတဲ့အုပျစု ကငျြးပခွငျးအားဖွငျ့ သူတို့အုပျစုအတှကျပါ ဒီကိုယျစားလှယျက တာဝနျယူသှားတော့မှာ ဖွဈတဲ့တှကျ မကငျြးပနိုငျတဲ့ အုပျစုကလညျး ပွဿနာ အခကျအခဲတော့ မရှိဘူးပေါ့”ဟု မှတျခကျြပွုသညျ။
ပလကျဝမွို့ပျေါနှငျ့ ဆမီးမွို့တို့တှငျ ရှိသော စဈဘေးရှောငျမြားကို ပုံစံ ၃ (က) မြားလြှောကျပွီး ရှေးကောကျ ပှဲတှငျ ပါဝငျနိုငျရနျ တာဝနျရှိသူမြားမှ ဆောငျရှကျပေးနလြှေကျရှိကွောငျး သိရသညျ။ ပလကျဝမွို့နယျတှငျ ကြေးရှာ အုပျစုပေါငျး ၁၀၂ အုပျစုရှိပွီး ၎င်းငျးကြေးရှာ အုပျစုထဲမှ ကြေးရှာကိုးအုပျစုမှာပါဝငျနိုငျမညျ မဟုတျကွောငျး ကိုယျစားလှယျလောငျးအခြို့က ခနျ့မှနျးကွသညျ။ လကျရှိ စညျပငျဝနျကွီး ဦးစိုးထကျမှာ လာမညျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ခငျြးပွညျနယျလှတျတျော ပလကျဝမွို့နယျ အမှတျ ၁ မဲဆန်ဒနယျမှ ပါဝငျယှဉျပွိုငျမညျဖွဈသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-75576
လကျရှိ ပွညျထောငျစုလှတျတျောသညျ အစိုးရကို အပွနျအလှနျထိနျးကြောငျးမှု အားနညျးနသေညျကို တှရေ့ သညျဟု ပွညျထောငျစု ကွံခိုငျရေးနှငျ ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီကိုယျစားပွု ဖားအံမွို့နယျ၊ ပွညျနယျလှတျတျော မဲဆန်ဒနယျအမှတျ ၂ ကိုယျစား လှယျလောငျး နနျးနီနီအေးက ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။ သူမသညျ ပထမအကွိမျ ပွညျထောငျစု လှတျတျောနှငျ့ လကျရှိ ဒုတိယအကွိမျ ပွညျထောငျစုလှတျတျောတှငျ ကရငျပွညျနယျ၊ အမှတျ ၆ အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျအဖွဈ တာဝနျ ထမျးဆောငျနသေူတဦီးလညျး ဖွဈသညျ။
“ကမြက လှတျတျောသကျတမျး ၂ ကွိမျ ဆကျတိုကျဆိုတော့ ကှာခွားခကျြတှအေမြားကွီးတှရေ့တယျ။ ဒီသကျတမျးအတှငျး မှာတော့ အရငျကလောကျ လှတျလပျစှာပွောဆိုခှငျ့မရတာတှေ၊ မေးခှနျးတှဆေိုလညျး ပိတျပငျခံရ တာမြိုးတှေ၊ လှတျတျောထဲမှာ တခြို့ကိုယျစားလှယျဆှေးနှေးတဲ့ဟာတှဆေို ပွနျပွီးတော့ တားမွဈကနျ့သတျတာတို့၊ အစိုးရရဲ့ အခကျဖွဈ စမေယျ့ဟာတှေ မဆှေးနှေးဖို့တို့၊ သူတို့ပွောတာတှေ ပွနျကွားရ တှရေ့တာ ပေါ့နျော”ဟု ကအေိုငျစီနှငျ့ သီးခွားတှဆေုံ့ မေးမွနျးရာတှငျသူမက ပွောသညျ။
ကွံ့ခိုငျရေး ပါတီကိုယျစားပွု ကရငျပွညျနယျ အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျ နနျးနီနီအေးသညျ ပွီးခဲ့သညျ့ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲ နှဈကွိမျဆကျ အနိုငျရသညျ့ ပွညျနယျ၏ တဦးတညျးသော အမြိုးသားလှတျတျော ကိုယျစားလှယျတဦးဖွဈကာ လာမညျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ပွညျနယျအရေး ပိုလုပျဆောငျရနျ ရညျရှယျ၍ ပွညျနယျလှတျတျော ဖားအံမဲဆန်ဒနယျ အမှတျ ၂ တှငျ ဝငျပွိုငျသှားမညျဖွဈသညျ။ http://kicnews.org/2020/09/%e1%80%9c%e1%82%8a%e1%80% 90%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%
ထိုငျး-မွနျမာနယျစပျရှိ ရှမျးစဈဘေးရှောငျမြားအနဖွေငျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ မဲပေးခငျြသျော လညျး အထောကျအထား တဈစုံတဈရာ မရှိသညျ့အတှကျ မဲပေးခှငျ့ဆုံးရှုံးနဦေးမညျဟု ရှမျးစဈဘေးရှောငျစခနျးမှ တာဝနျရှိသူနှငျ့ စဈရှောငျမြားက ပွောသညျ။
ထိုငျး-မွနျမာ နယျစပျတှငျ ရှမျးIDPs စဈရှောငျစခနျး ၅ ခုနှငျ့ Refugee ဒုက်ခသညျစခနျး ၁ ရှိပွီး အဆိုပါ စခနျးမြားရှိ ဒုက်ခသညျမြားမှာ နိုငျငံသားဖွဈလကျြ အထောကျအထားတဈစုံတဈရာမရှိသညျ့အတှကျ မဲပေးနိုငျမညျ့ အလားအလာ မရှိသလောကျဖွဈနသေညျဟု ကုနျးကြျော ဒုက်ခသညျစခနျးမှ စခနျးတာဝနျခံလညျးဖွဈ ရှမျးစဈဘေး ဒုက်ခသညျမြား ကူညီရေး ကျောမတီ (ထိုငျး-မွနျမာနယျစပျ) ကျောမတီဝငျလညျးဖွဈသညျ့ စိုငျးလငျးက ပွော သညျ။ အထောကျအထား တဈစုံတဈရာ မရှိသျောလညျး မဲပေးခှငျ့ရှိမညျဆိုပါက မဲပေးသှားမညျဟု စိုငျးလငျး က ဆကျ ပွောသညျ။
ထိုငျး-မွနျမာနယျစပျ မွနျမာဖကျခွမျးရှိ ရှမျး IDPs စဈဘေးရှောငျစခနျး ၅ ခုမှာ ကောငျးမုမိနျး၊ လှယျဆမျ စဈ(ပျ)၊ လှယျလနျ၊ လှယျတိုငျးလနျြး နှငျ့ လှယျကျောဝမျးတို့ဖွဈပွီး ထိုငျးဖကျခွမျးရှိ Refugee ဒုက်ခသညျ စခနျးမှာ ကုနျးကြျော စခနျးဖွဈသညျဟု သိရသညျ။ ထိုစခနျး ၆ ခုရှိ လူဦးရေ ခွောကျထောငျ့နှဈရာ ခနျ့မှာ လာမညျ့ရှေးကောကျပှဲတှငျ မဲပေးခှငျ့ ဆုံးရှုံးမညျ့ အနအေထားတှငျ ရှိနသေညျဟု ရှမျးစဈဘေး ဒုက်ခသညျမြား ကူညီရေး ကျောမတီ (ထိုငျး-မွနျမာနယျစပျ) ဆိုသညျ။
ရှမျးစဈဘေးရှောငျ IDPs မြားနှငျ့ Refugee ဒုက်ခသညျမြား မဲပေးခှငျ့ မရှိသညျ့ အခွားတဈဖကျတှငျ ထိုငျးနိုငျငံသို့ သှားရောကျအလုပျလုပျကိုငျနကွေသညျ့ ရှမျးရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားမြား မဲပေးခှငျ့ရရှိအောငျ ရှမျးတိုငျးရငျးသား ဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျ SNLD က ထိုငျးနိုငျငံရှိ အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ခြိတျဆကျကာ လုပျဆောငျနသေညျဟု SNLD အထှထှေေ အတှငျးရေးမှူးခြုပျ စိုငျးလိတျက ပွောသညျ။ နိုငျငံသားမြား ဖွဈလြှကျ နိုငျငံသားဖွဈကွောငျး အထောကျအထား စာရှကျစာတမျး တဈစုံတဈရာ မရှိသညျ့ ဒုက်ခသညျမြား မဲပေးခှငျ့ရရှိအောငျ ခြိတျဆကျပေးထားသျောလညျး အဆိုပါ ဒုက်ခသညျမြား မဲပေးခှငျ့ ရှိ/မရှိ တာဝနျရှိသူမြားအပျေါတှငျသာ မူတညျသညျဟု စိုငျးလိတျက ပွောသညျ။ https://www.bn ionline.net/mm/news-75561
Covid-19 ကပျရောဂါကွောငျ့ ကခငျြပွညျနယျရှိ ကြောကျမကျြရောငျးဝယျရေးလုပျငနျးမြားသညျ ယခငျထကျ ဈေးနှုနျး ထကျဝကျခကြာ ရောငျးခနြရေသညျဟု လုပျငနျးရှငျမြားထံမှ သိရသညျ။
မွဈကွီးနားမွို့ ဒသေထှကျကုနျအရောငျးစငျတာမြားတှငျ လာရောကျကွညျ့ရှု့သညျ့ လူဦးရေ လြော့နညျးသှားပွီး အရှုံးနှငျ့ ရငျဆိုငျလာရကွောငျး အဆိုပါနရောတှငျ ကြောကျပယငျးအရောငျး ဆိုငျဖှငျ့လှဈထားသူ ဒျေါတငျတငျနှယျက ယခုလို ပွောဆို သညျ။“ကမြတို့အစ ကိုဗဈမဖွဈခငျတုနျးကတော့ အနယျအရပျရပျက ခရီးသှားလာရေးအဖှဲ့တှရှေိကွတယျ။ သူတို့ အနနေဲ့ ကခငျြပွညျနယျကို လာရောကျတဲ့အခါမှာတော့ အသငျ့သငျ့ရောငျးရတယျ။ အခုကိုဗဈဖွဈတဲ့နောကျပိုငျး ခရီးသှားလာရေး တှကေိုပိတျလိုကျတယျဆိုတော့ လူတှတေိတျဆိတျသှားတာဘဲ။ ဘယျစငျတာမှာလညျး လူမရှိဘူး။ ဒီဈေးနှုနျးပိုငျးမှာလညျး ကိုဗဈမဖွဈခငျတုနျးက ၅သောငျးရောငျးလို့ရတဲ့ပစ်စညျးတှကေို အခုမရတော့ဘူး။ အခုဆို ၂ သောငျးလောကျအထိလြော့ပွီး ရောငျးနရေတယျ။ ကွာလာတော့ ဆိုငျခနျးဈေးတှနေဲ့ဆို အရှုံးပျေါလာနိုငျတယျ” ဟု ပွောဆိုသညျ။
မွဈကွီးနား စကျမှုဇုနျတှငျ ဖှငျ့လှဈထားသညျ့ ကြောကျမကျြအရောငျးဌာနတှငျလညျး ဝယျလကျအလှနျနညျးနသေညျ့အပွငျ ဈေးကှကျလညျး ကဆြငျးနကွေောငျး ကခငျြကြောကျမကျြလုပျငနျးရှငျမြား အသငျး ဥက်ကဌ ဦးရိတျနနျ့ဇလှေမျး က ပွောဆို သညျ။“အဓိကတော့ ကိုဗဈကွောငျ့ပွောလို့ရမှာပေါ့။ အခုဆိုရငျကြောကျမကျြဈေးကှကျတှကေ ၄၀ရာခိုငျနှုနျး လောကျကြ သှားတယျ။ အရငျတုနျးက သိနျးတဈရာလောကျရတဲ့ ပစ်စညျးတှဆေိုရငျ အခုဆို သိနျး ၆၀၊ ၅၀လောကျ ဘဲရတော့တယျ။ ပွီးရငျလာဝယျတဲ့ ဝယျလကျလညျး အလှနျနညျးသှားတယျ။ အရငျတုနျးကတော့ နိုငျငံ ခွားသားတှလေညျး လာဝယျကွ တာ ပေါ့။ ပွညျတှငျးအထဲကဘဲ လာကွညျ့ကွတယျ။ အဲ့တော့ ဝယျနှုနျးအားလညျး ၄၀ရာခိုငျနှုနျးကသြှားတာပေါ့။” ဟုပွောသညျ။ ကြောကျမကျြလုပျငနျးရှငျမြားအသငျးအနနှေငျ့ ကြောကျမကျြဈေးကှကျကို ပွညျတှငျးဈေးကှကျဖွဈထှနျးရနျ အတှကျနှငျ့ ဒသေခံပွညျသူမြား လုပျငနျးအခှငျ့အလမျးမြား ပိုမိုရရှိလာအောငျ လုပျဆောငျပေးသငျ့ကွောငျး သူကဆကျပွောသညျ။ https://burmese.kachin news.com/2020/09/17/covid19%e1%80%80%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80
ကရငျပွညျနယျတှငျ ယခုနှဈ ရာသီဥတုအခွအေနကွေောငျ့ ဖာလာအသီး အထှကျနညျးသညျ့အပွငျ ယခငျနှဈထကျ ကပျြ ၃, ဝဝဝ အောကျ ဈေးနှုနျးကဆြငျးသှားသညျ့အတှကျ ဖာလာစိုကျတောငျသူမြား အခကျအခဲဖွဈနဟေု ဒသေခံမြားထံမှ သိရသညျ။
ယခငျနှဈက ဖာလာသီးအခွောကျ ၁ ပိဿာလြှငျ ကပျြ ၁ဝ,ဝဝဝ ကြျောရှိခဲ့ပွီး ယခုနှဈ အသီးပျေါခြိနျ ကပျြ ၇ဝဝဝ ဝနျးကငျြ သာ ဈေးနှုနျးရှိ သညျ့အတှကျ အလုပျသမားခမြားနှငျ့ စားဝတျနရေေးဖွရှေငျးနိုငျရနျ ရသညျ့ဈေးဖွငျ့သာရောငျးနရေ သညျဟု သံတောငျကွီးမွို့ နယျ ဖာလာ စိုကျတောငျသူမြားက ပွောသညျ။ “သီးနှံပျေါစ ၇ ထောငျဈေးနဲ့ဆိုရငျ အလုပျသမားခနဲ့ မကိုကျဘူးပေါ့နျော။ ဝယျတဲ့သူတှလေညျး ရှာအထိ မဆငျးလာကွသေးဘူး။ တဈခြို့က ဝယျသမားဆီ စားဝတျနရေေး အတှကျ ငှကွေိုယူထားရတယျပေါ့နျော။ အသီးပျေါခြိနျ ပွနျသှငျးတယျ။ မိုးရှာ နောကျကတြော့ အသီးထှကျနညျး သှားတဲ့ အပွငျ ကိုဗဈရောဂါကာလပါရှိနတေော့ ဈေးကဘယျလိုဆကျဖွဈနအေုံးမလဲ မသိတော့ဘူး။” ဟု သံတောငျကွီးမွို့နယျ မိုငျ ၂ဝ ဒသေခံ စောစဲက စကျတငျဘာ ၁၆ ရကျတှငျ ကအေိုငျစီ သို့ပွောသညျ။
သံတောငျမွို့နေ ဖာလာသီးဝယျသူ နျောသီရိစံက “ ဈေးက အရငျနှဈလို မဟုတျဘူး တအားလြော့တယျ။ ကိုဗဈကာလ ကွောငျ့ ဈေးနညျး သှားတာလညျး ဖွဈမှာပေါ့နျော။ မနှဈတုနျးက ၁ သောငျးကြျောရှိတယျ။ အခုဈေးက ၇,၀၀၀ ပဲရှိတယျ။ စားဝတျနရေေး ခကျခဲကွတော့ ရတဲ့ဈေးနဲ့ ရောငျးရတာပဲပေါ့နျော။ ဒီနှဈပိုဆိုးမယျ။ သူတို့ (ဝယျသူ)ဝယျခငျြတဲ့အခြိနျမှ ဆငျးလာဝယျကွတာပါ။ ဒီခြိနျထိတော့ မလာကွသေး ဘူး” ဟု ကအေိုငျစီသို့ပွောသညျ။ ဖားလာစကေို့ စားသုံးကုနျမြားနှငျ့ ဆေးဝါးဖျောစပျသညျ့ နရောမြားတှငျ အသုံးပွုကွသညျ။ ပွညျတှငျးဝယျလိုအားနညျးသညျ့အတှကျ ဖာလာစဝေ့ယျယူမှု မြားသညျ့ တရုတျနိုငျငံကိုသာ ဈေးကှကျအဓိက မီခိုနရေသညျဟု ဖာလာစိုကျတောငျသူမြားထံမှ သိရသညျ။ http://kicnew s.org/2020/09/%e1%80%96%e1%80%ac%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%9e%e1%80
ကခငျြပွညျနယျ ဖားကနျ့မွို့တှငျ Covid-19 အတညျပွု လူနာ ၄ ဦး ထပျမံတှရှေိ့ကွောငျး ပွညျနယျ Covid-19 ကာကှယျ ထိနျးခြုပျရေးနှငျ့ အရေးပျေါတုံ့ပွနျရေးကျောမတီမှ သိရသညျ။ အဆိုပါ ပိုးတှလေူ့နာ ၄ ဦးသညျ ဖားကနျ့မွို့နယျ အေးမွသာယာအုပျစု၊ တောငျပွိုကြေးရှာမှ ပိုးတှလေူ့နာအမှတျစဉျ (၁၇၁၂)ဖွငျ့ ထိတှသေူ့မြားဖွဈကွသညျ။
“ဆရာတို့ ကနဦးသတငျးရရှိထားတာတော့ အမှနျပါ ခုပိုးတှတေဲ့သူက လူနာအမှတျ(၁၇၁၂)နဲ့ ထိတှခေဲ့တဲ့သူတှလေို့ သိရတယျ။ လူနာအမှတျ ၁၇၁၂ နဲ့ ပတျသကျပွီး Contact Tracing လုပျထားတဲ့သူတှဖွေဈတယျဆိုတာဘဲ သိရသေးတယျ။ သူတို့ရဲ့ Case အမှတျစဉျတော့ မထှကျလာသေးပါဘူး။” ဟု ဒုညှနျကွားရေးမှူး ဦးတငျ့နိုငျကပွောသညျ။
လူနာအမှတျ ၁၇၁၂ နထေိုငျခဲ့သညျ့ တောငျပွိုရှာကို စကျတငျဘာလ ၁၁ရကျနမှေ့စကာ Lock Down သတျမှတျထားပွီး ၎င်းငျးနှငျ့ဆကျစပျသူ ၂၀ ဦးကို သတျမှတျထားသညျ့ Quarantine Center မြားတှငျ Facility Q ထားပွီးနောကျ (SWAB) မြားယူကာ စဈဆေးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ လူနာအမှတျ ၁၇၁၂ သညျ စဈတှမွေို့မှ ဖားကနျ့မွို့ တောငျပွိုကြေးရှာသို့ သွဂုတျလ ၁၃ ရကျနေ့ ရောကျရှိခဲ့ခွငျးဖွဈကာ ဖားကနျ့မွို့ရှိ သီတာဂူစက်ခုဒါနဆေးရုံတှငျ Q ထားရှိသူဖွဈသညျ။ https://bu rmee.kachinnews.com/2020/09/17/%e1%80%96%e1% 80%ac%e1%80%b8%e1%80%80%e1
၁၈။ ရခိုငျပွညျနယျရှိ quarantine စငျတာမြားအတှကျ နစေ့ဉျ စားနပျရိက်ခာကို WFP က ထောကျပံ့မညျ
ရခိုငျပွညျနယျ၊ မွို့နယျရှဈမွို့နယျရှိ အသှားအလာ ကနျ့သတျစောငျ့ကွညျ့ရေး (quarantine) စငျတာမြားတှငျ အသှား အလာကနျ့သတျစောငျ့ကွညျ့ခံနရေသူမြားအတှကျ အသငျ့စားသုံးနိုငျသော အာဟာရပွညျ့ စားနပျရိက်ခာ မြားကို ကုလသမဂ်ဂ ကမ်ဘာ့စားနပျရိက်ခာအဖှဲ့ (WFP) က တဈရကျလြှငျ သုံးနပျစာ ထောကျပံ့သှားမညျ ဖွဈသညျ။ လူမှုဝနျထမျး၊ ကယျဆယျရေးနှငျ့ ပွနျလညျနရောခထြားရေး ဝနျကွီးဌာန၏ ပေါငျးစပျညှိနှိုငျး ဆောငျရှကျမှုဖွငျ့ ရခိုငျပွညျနယျအစိုးရနှငျ့ WFP တို့ ယခုကဲ့သို့ ပူးပေါငျး ကူညီထောကျပံ့ရနျ စကျတငျဘာလ ပထမပတျက သဘောတူ လကျမှတျရေးထိုးခဲ့ခကျြအရ ဖွဈကွောငျး WFP ၏ စကျတငျဘာလ ၁၅ ရကျနေ့ ထုတျပွနျခကျြတှငျ ဖျောပွထားသညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ ဩဂုတျလ ၁၆ ရကျနမှေ့စ၍ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး ဒသေတှငျး COVID-19 ရောဂါ ကူးစကျမှုသညျ စဈတှမွေို့ကို ဗဟိုပွု၍ မြားပွားလာခဲ့ပွီးနောကျ စကျတငျဘာလ ၁၀ ရကျနအေ့ထိ ကိနျးဂဏနျးမြားအရ ရခိုငျပွညျနယျတှငျ လူ ၁၅၀၀ ခနျ့ သညျ အစိုးရက ဖှငျ့လှဈထားသော quarantine စငျတာမြားတှငျ အသှားအလာ ကနျ့သတျမှု ခံယူနရေသညျ။“ရခိုငျ ပွညျနယျမှာရော မွနျမာနိုငျငံရဲ့ တခွားဒသေတှမှောပါ စားနပျရိက်ခာနဲ့ အာဟာရ လိုအပျခကျြတှကေို ဖွညျ့ဆညျးနိုငျရေး နိုငျငံတျောအစိုးရရဲ့ ဆောငျရှကျခကျြတှမှော အကူအညီလိုအပျသရှေ့ အခုထကျပိုပွီး ပါဝငျကူညီပေးနိုငျဖို့ ကြှနျတျောတို့ အဆငျသငျ့ပါပဲ”ဟု WFP ၏ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဌာနကေိုယျစားလှယျ မစ်စတာ စတီဖငျအနျဒါဆငျက ထုတျပွနျခကျြတှငျ ပွောထားသညျ။
ရခိုငျပွညျနယျရှိ quarantine စငျတာ ရှဈခုမှာ ကြောကျဖွူ၊ ကြောကျတျော၊ စဈတှေ၊ ပေါကျတော၊ မငျးပွား၊ မွပေုံ၊ မွောကျဦးနှငျ့ အမျးမွို့နယျတို့တှငျ တညျရှိသညျ။ လူမှုဝနျထမျး၊ ကယျဆယျရေးနှငျ့ ပွနျလညျနရောခထြားရေး ဝနျကွီးဌာန၏ ကွီးကွပျမှုဖွငျ့ WFP သညျ နရေပျစှနျ့ခှာသူမြားနှငျ့ ထိခိုကျလှယျအုပျစုမြားကို ရခိုငျပွညျနယျ အလယျပိုငျးတှငျ လူဦးရေ ၂ သိနျးနီးပါးနှငျ့ ရခိုငျပွညျ မွောကျပိုငျးတှငျ လူဦးရေ ၁ သိနျးခနျ့တို့ကိုလညျး လစဉျ ထောကျပံ့ပေးလကျြရှိသညျ။ http://www. mizzimaburmese.com/article/73492
၁၉။ ကိုဗဈ-၁၉ ကနျြးမာရေးစဈဆေးနစေဉျ မူးယဈဆေးမိ
တောငျကွီး – ဟိုပုံး ပွညျထောငျစု လမျးမပျေါရှိ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ ကာကှယျ တားဆီးရေး စဈရေးဂိတျမှာ ကနျြးမာရေး စဈဆေးမှုမြား ပွုလုပျနစေဉျ မူးယဈဆေးဝါး ဖမျးဆီးရမိကွောငျး စုံစမျးသိရှိရသညျ။
စကျတငျဘာ (၁၇) ရကျ နလေ့ညျ ၁၂ နာရီဝနျးကငျြ တှငျ ဟိုပုံးမွို့အဝငျ တိုးဂိတျအနီးရှိ ကနျြးမာရေး စဈဆေးဂိတျ၌ ကနျြးမာရေး စဈဆေးနစေဉျ ဆိုငျကယျမောငျးနှငျလာသညျ့ ဆယျကြျောသကျ အရှယျ အမြိုးသား (၂) ထံ WY စာတနျးပါ ပနျးရောငျ စိတျကွှဆေးပွား ၂၂ ပွား ဖမျးဆီးရမိကွောငျး ဟိုပုံးဂိတျမှာ ကနျြးမာရေး စဈဆေးမှု ပွုလုပျနသေညျ့ စတေနာ့ ဝနျထမျး တဈဦးထံ သိရသညျ။“ဆိုငျကယျ အတူစီးလာတာ ၂ ယောကျ ဆိုငျကယျ မောငျးတဲ့သူ က ထှကျပွေးသှားတာပေါ့ နျော။ တဈဦးပဲ ဖမျးမိတယျ” ဟု စတေနာ့ ဝနျထမျး ကိုကောငျးခနျ့ကြျော က ပွောသညျ။
အဆိုပါ ဟိုပုံး ကနျြးမာရေး စဈဆေးရေးဂိတျသညျ ၂၄ နာရီ ခရီးသှားပွညျသူမြားကို စဈဆေးသှားမညျဖွဈပွီး ထောကျခံစာ ပါမှသာ မွို့တှငျးသို့ ဝငျခှငျ့ ပွုမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ “ထောကျခံစာ မပါပဲနဲ့ရောကျလာတာ။ သူတို့ လှယျအိတျထဲမှာ ဓားပါတယျ။ အဲ့ဒါ ကနြျောတို့က အဲ့ဓားကိုပဲ အရငျဆုံး စမွငျတာပါ။ အဲ့ဓားကို စမွငျတော့ အဲ့ဓားကို ထုတျခိုငျးတာ ဓားကို ထုတျတဲ့ခြိနျမှာ လှယျအိတျမှာထဲ ဆေးတှေ ထှကျလာတာ” ဟု ကိုကောငျးခနျ့ကြျော ကပွောသညျ။
မူးယဈဆေးဝါး ဖမျးဆီးရမိသညျ့ အမြိုးသားသညျ အသကျ ၁၈ ဝနျးကငျြခနျ့ရှိပွီး ဟိုပုံးမွို့နယျ တုံခမျးရပျကှကျ က ဖွဈ ကွောငျးသိရသညျ။ ထိုလူငယျကို တောငျကွီးမွို့မရဲစခနျး လကျထဲသို့ အပျလိုကျကွောငျး သိရသညျ။ https://bur mese.s hannews.org/archives/18498
၂၀။ COVID-19 ဆိုငျရာ လမျးညှနျခကျြမြားနှငျ့အညီ KNC ပါတီက မဲဆှယျစညျးရုံးမှုမြား ပွုလုပျနပွေီး နိုဝငျဘာ ၈ ရကျတှငျ ရှေးကောကျပှဲ မဖွဈနိုငျဟု KNC ပါတီဥက်ကဋ်ဌ ပွောကွား
COVID-19 ရောဂါဆိုငျရာ လမျးညှနျခကျြမြားနှငျ့အညီ ကခငျြအမြိုးသားကှနျဂရကျ KNC ပါတီက မဲဆှယျစညျးရုံးမှုမြား ပွုလုပျနပွေီး နိုဝငျဘာ ၈ ရကျတှငျ ရှေးကောကျပှဲမဖွဈနိုငျကွောငျး KNC ပါတီဥက်ကဋ်ဌ ဒေါကျတာ Mကောနျလက ပွောကွား သညျ။ ကခငျြပွညျနယျ၊ ဖားကနျ့မွို့နယျတှငျ စကျတငျဘာ ၁၇ ရကျက COVID-19 အတညျပွုလူနာလေးဦး တှရှေိ့ကွောငျး သတငျးရသညျ့အတှကျ ၎င်းငျးတို့ပါတီ၏ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးလုပျငနျးမြားကို ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနနှငျ့ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျတို့၏ ညှနျကွားခကျြမြားအတိုငျး ဆောငျရှကျကွရနျ ပွောကွားထားကွောငျး ဒေါကျတာ M ကောနျလက ပွောကွားသညျ။
KNC ပါတီ ကိုယျစားပွု၍ ရှေးကောကျပှဲ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျကွမညျ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျးမြားအနဖွေငျ့ မဲဆှယျ စညျးရုံးရေး လုပျငနျးမြား ဆောငျရှကျရာတှငျလညျး လူထုကွားသို့ လူစုလူဝေးဖွငျ့ မဲဆှယျစညျးရုံးခွငျးမြား မပွုလုပျကွရနျ ညှနျကွားထားကွောငျး ၎င်းငျးက ပွောကွားသညျ။ ထို့ပွငျ လကျရှိဖွဈပှားနသေညျ့ COVID-19 ရောဂါသညျ အောကျတိုဘာ တှငျ ရောဂါပွနျ့ပှားမှု အရှိနျမွငျ့တကျလာနိုငျပွီး နိုဝငျဘာ ၈ ရကျတှငျ ရှေးကောကျပှဲ မဖွဈနိုငျကွောငျးလညျး ဒေါကျတာ M ကောနျလက ဆိုသညျ။“အဲဒီတော့ အခုက ဘယျလိုဖွဈနသေလဲဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့ တှတေ့ော့တှရေ့မှာဖွဈနတေယျ။ ဒီကိစ်စ အခု UEC ကလညျး ပွတျပွတျသားသား ဘာမှမပွောဘူး။ အမှနျကတော့ Tempo အရဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့ ခနျ့မှနျး တာက အောကျတိုဘာလဆိုရငျ အမွငျ့ဆုံးဖွဈလာမှာလေ။ အမွငျ့ဆုံးဖွဈလာမှာ အဲဒီတော့ ဘယျလိုမှ နိုဝငျဘာ ၈ က မဖွဈ နိုငျဘူးဗြာ။ ဒါ အမှနျပဲ။ အဲဒါ သူတို့ မွနျမွနျထကျထကျလုပျသငျ့တယျ”ဟု KNC ပါတီဥက်ကဋ်ဌ ဒေါကျတာ M ကောနျလက ပွောကွားသညျ။
ကခငျြအမြိုးသားကှနျဂရကျ KNC ပါတီအနဖွေငျ့ လာမညျ့ ၂၀၂၀ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ကခငျြပွညျနယျအတှငျးရှိ မဲဆန်ဒနယျမွေ ၁၇ နရောနှငျ့ ရှမျးပွညျနယျအတှငျး မဲဆန်ဒနယျမွေ သုံးနရော စုစုပေါငျး မဲဆန်ဒနယျ ၂၀ တှငျ ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျသှား မညျဖွဈသညျ။ https://news-eleven.com/article/192780
လကျရှိကပျရောဂါကာလဟာ တရားမြှတတဲ့ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပဖို့ မဖွဈနိုငျတာကွောငျ့ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျအနနေဲ့ ရှေးကောကျပှဲကို ပွနျလညျသုံးသပျဖို့ ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ ANP က ကွညောခကျြထုတျပွနျ တိုကျတှနျး လိုကျပါတယျ။ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲဟာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ဒီမိုကရစေီပွောငျးလဲရေးအတှကျ အရေးပါတဲ့ ရှေးကောကျပှဲဖွဈတာကွောငျ့ ဒီရှေးကောကျပှဲ တရားမြှတမှုရှိဖို့ လကျရှိ NLD ဦးဆောငျတဲ့ နိုငျငံတျောအစိုးရမှာလညျး တာဝနျရှိတယျလို့ ANP ပါတီကပွောထားပါတယျ။
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျပွနျ့ပှားမှုနှုနျးတှေ တနတေ့ခွား ဆိုးဆိုးလာနတောကွောငျ့ ရှေးကောကျပှဲရကျကို ရှဆေို့ငျးပေးဖို့ ပွညျထောငျစုကွံခိုငျရေးနဲ့ ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီအပါအဝငျ ပါတီ ၂၀ ကြျောက စကျတငျဘာလ ၁၅ ရကျနမှေ့ာ ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျထံ အိတျဖှငျ့ပေးစာ ပေးပို့ခဲ့ပါတယျ။ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကူးစကျမှုနှုနျး မွငျ့နတောကွောငျ့ မလိုအပျဘဲ နအေိမျအပွငျမထှကျကွဖို့ Stay at home အမိနျ့ အစိုးရ ထုတျပွနျထားတဲ့ မွို့နယျတှကေ ရှေးကောကျခံကိုယျစားလှယျ တှဟော မဲဆှယျစညျးရုံးရေးဆငျးလို့ မရတာကွောငျ့ အှနျလိုငျးကနပေဲ မဲဆှယျနကွေပါတယျ။ Stay at Home အမိနျ့ ထုတျပွနျမထားတဲ့ မွို့နယျက ကိုယျစားလှယျတှကေတော့ လူ ၅၀ ဦးထကျမပိုဘဲ မဲဆှယျစညျးရုံးခှငျ့ရှိကွောငျး ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက ထုတျပွနျထားပါတယျ။
လာမယျ့ ၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲကို နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျနမှေ့ာ ကငျြးပမယျလို့ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက ထုတျပွနျထားပွီး ရှေးကောကျပှဲ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးတှကေို စကျတငျဘာလ ၈ ရကျနကေ့နေ နိုဝငျဘာ ၆ ရကျနအေ့ထိ တရားဝငျ ခှငျ့ပွုထားတာပါ။ https://www.rfa.org/burmese/news/2020-election-and-ANP-party-09162020140 808.html
သြှမျးပွညျတောငျးပိုငျး ဆီဆိုငျမွို့နယျ၊ ဆိုငျခေါငျမှ အတညျပွုလူနာ နှငျ့ ထိတှခေဲ့သော သူတဈဦးသညျ ကိုဗဈ ၁၉ ပိုးတှေ့ ရှိကွောငျး စုံစမျးသိရှိရသညျ။ စကျတငျဘာ ၁၈ ကနျြးမာရေးထုတျပွနျခကျြအရ ကိုဗဈ-၁၉ ကူးစကျခံရသူ (၂၅၆) ဦး ရှိပွီး၊ သဆေုံးသူ (၁)ဦးရှိကွောငျး၊ ထိုထဲတှငျ ဆီဆိုငျမွို့နယျ၊ ဆိုငျခေါငျ ကြေးရှာ မှ အသကျ ၁၃နှဈ အရှယျ တဦး ပါဝငျကွောငျး သိရသညျ။
“သူကဆိုငျခေါငျကဘဲ၊ ခရီးသှား ရာဇဝငျမရှိဘူး။ရောဂါ လကပတာတှမေရှိဘူး။ သူအဖကေ အတညျပွုလူနာ ဆိုတော့၊ သူအဖနေဲ့ ထိတှေ့ လို့ ပိုးတှတေ့ယျလို့ ဘဲယူဆရတယျ” ဟု သြှမျးပွညျနယျတောငျပိုငျး ပွညျနယျ အထူးရောဂါ နှိမျးနငျး ရေး လကျထောကျညှနျကွားရေးမှူး ဒေါကျတာဇဝနကို က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကိုပွောသညျ။ ၎င်းငျးပိုးတှလေူ့နာကို သြှမျးပွညျနယျတောငျးပိုငျး တောငျကွီးမွို့ စဝျစံထှနျးဆေးရုံသို့ ပိုးဆောငျလာပွီး၊ထို သူနှငျ့ ထိတှသေူ့မြားကိုလညျး ပိုးစဈဆေးထားကွောငျး ဒေါကျတာ ဇဝနကို ကဆိုသညျ။ အဆိုပါ ပိုးတှလေူ့နာ၏ မိသားစုမြားကို ဆိုငျခေါငျတှငျ Quaratine ဝငျထား ကွောငျး သိရသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/18507
မွနျမာနိုငျငံတှငျတကြော့ပွနျဖွဈပှားနသေညျ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျ(ဈ)ချေါ ကိုဗဈရောဂါဒုတိယလှိုငျးကွောငျ့ အားကစားနဲ့ ကနျြးမား ရေးဝနျကွီးဌာန၏ ကနျ့သတျပိတျပငျမူ့မြားကွောငျ့ အတိုကျခံပါတီမြားမဲဆှယျရာတှငျ အခကျကွုံနရေကွောငျး အတိုကျခံ ပါတီမြားထံမှ သိရသညျ။
ကိုဗဈရောဂါကွောငျ့ လကျရှိအနိုငျရပါတီမြားအတှကျမဲဆှယျရာတှငျအခကျအခဲမရှိသျောလညျး တိုငျးရငျးသားပါတီမြား အတှကျ ဇနျနဝါရီလမှစတငျပွီး အခကျကွံနရေကွောငျး ခငျြးအမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီ မိုငျ Cherry Zahau ကဆို သညျ။“ကြှနျမတို့ပါတီအားလုံးကတော့ အကုနျလုံးနှဈနာနပွေီ၊ အထူးသဖွငျ့ ဇနျနဝါရီလကနေ ဧပွီလအထိ ဘာမှမလုပျ နိုငျကွဘူး၊ (၄) လလုံးလုံးဘာမှမလုပျနိုငျကွဘူး၊ ဇျူလိုငျလကနပေဲ ကြှနျမတို့ နဲနဲပါးပါးလုပျလာနိုငျတယျ၊ စကျတငျဘာလ ကနကေတော့ လုပျရှားလို့ရမဲ့အခြိနျမှာ အခုလို ဒုတိယလှိုငျးကထနတေော့ ခငျြးပါတီအတှကျ အရမျးနှဈနာနတေယျ၊ အနိုငျရ ပါတီကတော့ လုပျရှားမူအမြားကွီးရှိနိုငျတယျ၊ ကိုဗဈကွောငျ့ အကူအညီကအစ လုပျရှားလို့ရတယျ၊ ကြှနျတျောတို့ ရခိုငျပွညျနယျနှငျ့ ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမွို့နယျကို သှားဖို့အဆငျသငျ့ပွငျနပေမေဲ့ စဈရေးကွောငျ့၊ကိုဗဈကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ မသှားနိုငျကွဘူး၊ အဲဒါကွောငျ့ အရမျးနှဈနာနတေယျ” ဟုပွောသညျ။
ထို့ပွငျ ကိုဗဈရောဂါကွောငျ့ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ မဲဆှယျစညျးရုံးရာတှငျ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာန၏ လမျးညှနျခကျြလိုကျ နာရနျ လိုအပျသောကွောငျ့ ပါတီအသဈမြားအတှကျ ပိုပွီးကွိုးစားနရေကွောငျး စဈကိုငျးဒသေကွီး ကလေးမွို့နယျ ပွညျထောငျစု ကောငျးကြိုးဆောငျပါတီမှ တိုငျးလှတျတျောကိုယျစားလှယျနရောယှဉျပွိုငျမညျ့ ဦးထှနျးနိုငျဝငျး(မငျးရဲစဈနိုငျ)က သုံးသပျသညျ။
အတိုကျခံပါတီမြားက ကိုဗဈဒုတီယလှိုငျးကွောငျ့ ပါတီစညျးရုံးရေးဆငျးရာတှငျ အခကျအခဲမြားစှာကွုံတှရေ့သညျ ဆိုသျော လညျး အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီအနဖွေငျ့ ကြေးရှာကိုယျစားလှယျမြား၏ ကွိုးပမျးမူကွောငျ့ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ရိုကျခကျမူ့ရှိမညျမဟုတျကွောငျး ကလေးမွို့ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒျေါအေးအေးမူကဆိုသညျ။ သူက စညျးရုံးရေးကတော့ လောလောဆယျရပျနားထားတယျ၊ ဘယျတော့ပွနျစမလဲဆိုတာတော့ ပွောလို့မရသေးဘူး၊ ကနျြးမာရေး ဝနျကွီးဌာန ညှနျကွားခကျြအတိုငျးပါပဲ၊ ကြှနျမတို့ ပါတီကတော့ အဲလောကျကွီး ရိုကျခကျခံရမယျလို့တော့ မထငျဘူး၊ ကြှနျတော့တို့ ကြေးရှာတှမှော ပါတီအဖှဲ့ခှဲတှရှေိတယျလေ၊ ကနျြးမားဝနျကွီးဌာနညှနျကွားခကျြအတိုငျး ဆကျလုပျသှားမှာပါ၊ ပါတီကိုတော့ ကိုဗဈဒုတိယလှိုငျးကွောငျ့ ရိုကျခကျေသှားမယျလို့တော့ မထငျဘူးဟု ပွောသညျ။ https://www.chinwo rld.org/2020/09/17/%e1 %80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%97%e1%80%
မှနျပွညျနယျ သဈတောဦးစီးဌာနရုံးက ဝနျထမျး ၈ ဦးအပါအဝငျ စုစုပေါငျး ၁၁ ဦး ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ ကူးစကျခံရတယျလို့ စကျတငျဘာ ၁၇ ရကျ ညနပေိုငျးမှာ မှနျပွညျနယျ ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာနက ထုတျပွနျပါတယျ။ သဈတောဦးစီးဌာနက ဝနျထမျး ၁ ဦးမှာ စကျတငျဘာ ၁၅ ရကျက ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ တှရှေိ့ပွီးနောကျ မှနျပွညျနယျ သဈတောဦးစီးဌာနရုံးက ညှနျကွားရေးမှူး အပါအဝငျ ဝနျထမျး အားလုံးကို ဓာတျခှဲနမူနာ စဈဆေးခဲ့ရာမှ ဝနျထမျး ၈ ဦး ကူးစကျခံခဲ့ရတာပါ။
အခုအခါမှာတော့ ရောဂါပိုး ကူးစကျခံရတဲ့ ကိုဗဈ-၁၉ လူနာ ၁၁ ဦးနဲ့ ထိတှခေဲ့တဲ့သူ ၅၀ ကြျောကို ကှာရနျတငျး စငျတာ ပို့ဆောငျထားတယျလို့ မှနျပွညျနယျ ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာန ဒုပွညျနယျဦးစီးမှူး ဒေါကျတာဝတျမှုံက ပွောပါတယျ။ ရောဂါကူးစကျခံရသူတှနေဲ့ ထိတှခေဲ့တဲ့ မျောလမွိုငျ သဈတောဦးစီးဌာနရုံးကိုတော့ အသှားအလာ ကနျ့သတျထားပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/411154
ရခိုငျပွညျနယျ၊ ရသတေ့ောငျမွို့နယျ၊ ဦးဂါကြေးရှာမှ အမြိုးသမီးတဈဦးအား အဓမ်မပွုကငျြ့ခဲ့သညျ့ တပျမတျောသား ၃ ဦးကို ဥပဒနှေငျ့အညီ ထိရောကျပွငျးထနျစှာ အရေးယူနိုငျရေးနှငျ့ ကနျြတာဝနျရှိသူမြားအားလညျး စဈစညျးကမျးအရ အရေးယူ နိုငျရေးအတှကျ ဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး တပျမတျောသတငျးမှနျ ပွနျကွားရေးအဖှဲ့မှ စကျတငျဘာလ ၁၆ ရကျနေ့ တှငျ သတငျးထုတျပွနျသညျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ဇှနျလ ၂၉ ရကျနကေ့ တပျမတျောစဈကွောငျးတဈခုသညျ ဦးဂါကြေးရှာသို့ သနေတျပဈဖောကျ ဝငျရောကျလာပွီး နောကျ ည ၁၁ နာရီခနျ့တှငျ နအေိမျ၌ပုနျးခိုနသေညျ့ အမြိုးသမီးကို တပျမတျောသားသုံးဦးက မှတျပုံတငျစဈဆေးမညျဟု အကွောငျးပွကာ နအေိမျမှချေါထုတျသှားခဲ့ပွီး အနီးရှိ လူမရှိသောနအေိမျတှငျ အဓမ်မ ပွုကငျြ့ခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး ကာယကံရှငျ အမြိုးသမီးက သတငျးထောကျမြားကို ပွောဆိုထားသညျ။ ထို့အပွငျ ကလေးမှေးဖှားပွီး (၆)ရကျသာရှိသေးသညျ့ အသကျ ၁၉ နှဈအရှယျ သမီးဖွဈသူကိုလညျး စဈဆေး စရာရှိသညျဟုဆိုကာ နအေိမျပွငျသို့ချေါထုတျသှားခဲ့ပွီးနောကျ အဓမ်မပွု ကငျြ့ရနျကွိုးပမျးခဲ့ကွောငျး၊ ယောကျခမ တျောစပျသူမှ သှားရောကျတောငျးပနျပွောဆိုခဲ့သဖွငျ့ လှတျမွောကျလာခဲ့ခွငျးဖွဈ ကွောငျး ကြူးလှနျခံရသညျ့ အမြိုးသမီးက ပွောသညျ။
ယငျးသို့ ပွုကငျြ့ခဲ့သူတို့အား ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၃၇၆ မုဒိမျးမှု၊ ကာမကို အတငျး အဓမ်မရယူမှု ပုဒျမ ၃၆၆၊ မုဒိမျးကငျြ့ကွံရနျ ကွိုးပမျးမှု ပုဒျမ ၁၁၄ တို့ဖွငျ့ ပွီးခဲ့သညျ့ ဇူလိုငျ ၁၀ ရကျနကေ့ စဈတှမွေို့မရဲစခနျးမှာ ကြူးလှနျခံရသူအမြိုးသမီးက တရားလို လုပျပွီး အမှုဖှငျ့ထားခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ အဆိုပါ တိုငျကွားမှုနှငျ့ပတျသကျ၍ တပျမတျောအနဖွေငျ့ ဖွဈစဉျမှနျပျေါပေါကျ စရေေး အတှကျ စဈဆေးမှုမြား ဆောငျရှကျရာတှငျ စဈဆငျရေးတာဝနျထမျးဆောငျရသညျ့ နယျမွဖွေဈခွငျး၊ စဈဆေးရမညျ့ သံသယ ရှိသူမြားအနဖွေငျ့ လမျးပနျးဆကျသှယျမှုခကျခဲသညျ့နရောဒသေတှငျ ရောကျရှိနခွေငျးတို့ကွောငျ့ အခြိနျအနညျး ငယျ ကွနျ့ကွာပွီးမှသာ စုံစမျးစဈဆေးမှုမြားဆောငျရှကျနိုငျခဲ့ကွောငျး ထုတျပွနျခကျြတှငျပါရှိသညျ။
သို့သျောလညျး နှဈဖကျသကျသထှေကျဆိုခကျြမြားမှာ ကှဲလှဲမှုမြားရှိနသေဖွငျ့ စကျတငျဘာလဆနျး၌ ပိုမိုတိကသြညျ့ စဈဆေးခကျြမြားနှငျ့ ဒုတိယအကွိမျ ထပျမံစဈဆေးမှသာ အဆိုပါပွဈမှုကြူးလှနျသူ ၃ ဦးမှာ ပွဈမှုကြူးလှနျကွောငျး ဝနျခံ ထှကျဆိုဖွောငျ့ခကျြပေးခဲ့ကွောငျး တပျမတျောကထုတျပွနျထားသညျ။ နဈနာသူအမြိုးသမီးအား အကူအညီပေးနေ သူမြားက ယငျးအမှုကိုပှငျ့လငျးမွငျသာပွီး လှတျလပျစှာ တရားစီရငျရေးရှိစရေနျအတှကျ အရပျဘကျတရားရုံးတှငျ စဈဆေးပေးရနျ လိုလားနကွေသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-75588
မှတျခကျြ။ သကျဆိုငျရာသတငျးမီဒီယာအသီးသီးမှ ကောကျနုတျဖျောပွခွငျး ဖွဈပါသညျ။